အမေစု၏ စကားမိန့်ခွန်း အနှစ်သာရများ (၂၀၁၀)
ကျွန်တော်အမေအရင်းလို လေးစားချစ်ခင်ရသော လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဟာ ၁၃.နိုဝင်ဘာလ.၂၀၁၀ မှာပြန်လည်နေအိမ်အကျယ်ချုပ်မှ လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါပြီ။ လူထုခေါင်းဆောင်၊ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်၊ ငြိမ်းချမ်းရေးခေါင်းဆောင်ကောင်း တဦးပီပီ အမေစုဟာ မြန်မာပြည်ကြီးအတွက်၊ ပြည်သူတွေအတွက် အားသစ်၊ ခွန်အားသစ်၊ လမ်းစဉ်သစ်၊ အတွေးအခေါ်သစ်၊ ချဉ်းကပ်မှုအသစ်တွေ ကိုဖြစ်စေသော စကားများ မိန့်ခွန်းများကို ပြောဆိုနေပါတယ်။ အမေကိုယ်တိုင်လည်း ပြည်သူတွေအတွက် မနေမနား လှုပ်ရှားနေပါတယ်။ ပြည်သူ မျက်ရည်၊ ပြည်သူ့အသံ၊ ပြည်သူတွေရဲ့ သက်ပြင်းချသံ၊ ပြည်သူတွေရဲ့ ချွေးတွေ သွေးတွေ ကိုနားလည်ခံစားနိုင်သူပီပီ ပြည်သူ့ကိုယ်စား တင်ပြနိုင်သူဖြစ်ကြောင်း အမေစုရဲ့ ရဲရဲတောက် မိန့်ခွန်းများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ယခု ကျွန်တော်ကြိုးစား ရှာဖွေတင်ပြလိုက်သော စာကိုး (quotes) လေးများဟာ အမေစု လွတ်မြောက်ပြီး ၂ ပတ်အတွင်း ပြည်သူတွေ၊ သတင်းမီဒီယာတွေ ကိုပြောကြားခဲ့သော မိန့်ခွန်းနဲု့အင်တာဗျုးတွေကနေ ကောက်နုတ်ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အမေစုရဲ့ အတွေးအခေါ်များ ကိုလေ့လာသိရှိပြီး နိုင်ငံအကျိုး လူမျိုးအကျိုး ကို အမေစုနှင့် အတူလက်တွဲပြီး ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ပြတ်ပြတ်သားသား ဖော်ထုတ်လုပ်ကိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုရင်း.....။
၂. ဒီဇင်ဘာလ. ၂၀၁၀
ဂျပန်ရောက်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား ဒုက္ခသည်တွေကို ပြောချင်တာကတော့ ဘာဖြစ်လို့ ကိုယ့်တိုင်ပြည်ကို စွန့်ခွါပြီးလာခဲ့ရတာလဲဆိုတာကို မမေ့ကြပါနဲ့။ ကိုယ်ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုလည်း မမေ့ပါနဲ့။ အဲဒါကလည်း ကျွန်မတို့ တိုင်းပြည်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို တနည်းတဖုံအားဖြင့် ထိန်းသိမ်းခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်း ကျွန်မပြောချင်ပါတယ်။
(ဂျပန်နိုင်ငံ ANN သတင်းဋ္ဌာန အင်တာဗျုးမှ (၁၈. နိုဝင်ဘာလ. ၂၀၁၀)
တဘက်က ရှုံးစေ၊ တဘက်က နိုင်စေ ပြောတာ မဟုတ်ဘူး။ တဘက်ကလည်း ကိုယ့် အမြင်ကိုပြောရမယ်၊ နောက်တဘက်ကလည်း ကိုယ့်အမြင်ကို ပြောမယ်၊ သဘောမတူတာတွေ ရှိရင်လည်း ညှိယူမယ်ပေါ့နော်။ ၂ ဘက် စလုံးအတွက် အောင်နိုင်မှု ဖြစ်ရမယ်။ အဲဒါမျိုး ကိုပြောပေမယ့်လည်းပဲ နည်းနည်းမှ သဘောမပေါက်ဘူး။ မယုံတာလား၊ သဘောမပေါက်တာလား။ ဒါမှမဟုတ် တပ်မတော် အသိုင်းအဝန်းမှာ ဒီလိုပေါ့နော် … အခြေအတင် စကားပြောပြီးတော့ ညှိနှိုင်းယူတဲ့ အလေ့ အထ မရှိလို့လား၊ အဲဒါတွေက အများကြီးကို စဉ်းစားစရာ ဖြစ်တယ်။
ဂန္ဓီကြီးက ဟိန္ဒူဘာသာဝင် ဆိုပေမယ့် ခရစ်ယာန် ဓမ္မသီချင်းတပုဒ်ကို သိပ်ပြီးတော့ သဘောကျတယ် ဆိုတာလေ။ အဲဒီ သီချင်းဟာ Lead Kindly Light ဆိုတာ သူပြောထားတာတော့ အရှည် အဝေးကြီး မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ တလှမ်းချင်း တလှမ်းချင်းသာ မြင်ခွင့်ပေးပါဆိုတာ၊ အဲဒါကို ဂန္ဓီကြီးက ယုံသလို အဲဒီဟာကို အန်တီလည်းယုံတယ်။ တလှမ်းချင်း တလှမ်းချင်းသာ မှန်အောင် လှမ်းနိုင်အောင်လို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကြိုးစားပြီးသွားမယ်၊ တလှမ်းချင်း တလှမ်းချင်းသာမှန်လို့ရှိရင်တော့ လမ်းမှန်ပေါ်ကနေ နေရာမှန်ကို ရောက်မှာ ပေါ့လေ။ အဝေးကြီး စိတ်ကူးမယဉ်စေချင်ဘူး။ နောက်ပြီးတော့ အန်တီက စိတ်ကူးယဉ် မျှော်လင့်ချက်ကို သိပ် အယုံအကြည်မရှိဘူး။ မျှော်လင့်ချက်ဆိုတာ ကြိုးစားချင်မှု။ ကိုယ်ကြိုးစား သလောက်ပဲ မျှော်လင့်ပိုင်ခွင့် ရှိတယ်လို့ အဲဒီလိုပဲ အယုံအကြည် ရှိရှိနဲ့ ကြိုးစားသွားမှာပဲ။
ပြည်တွင်းက လူငယ်တွေနဲ့ ပြည်ပက လူငယ်တွေကို ဆက်စပ်မှု ရှိစေချင်တယ်။ ပြည်ပ ရောက်သွားတဲ့ လူငယ်တွေက ပြည်တွင်းမှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ၊ ကိုယ့်ရဲ့သက်တူ ရွယ်တူတွေကို မမေ့စေချင်ဘူး။ မေ့လည်းမမေ့ဘူးလို့ အန်တီထင်တယ်။ အခု တော်တော်များများက ဘလောဂ့်ဆိုက်တွေ လုပ်တာတို့၊ အင်တာနက်မှာ ဆက်နွှယ်တာတို့ ဘာတို့ လုပ်နေတယ် ဆိုတော့ ပြည်တွင်းကို မမေ့ဘူးလို့ ထင်တယ်။ အဲဒါကို အင်အား တခုအနေနဲ့ ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ ဆက်ပြီးတော့ ရပ်တည်ပေးမယ်လို့ ထင်တယ်။
7:18 PM နိုင်ငံရေးဆိုတာ ဘယ်သူ့ဆီက ဘယ်အသိုင်းအဝန်းကမှ ဖယ်ထုတ်လို့မရဘူး။ နိုင်ငံရေးကို ဖယ်ထုတ်လို့ မရဘူး။ အားလုံးက နိုင်ငံရေးနဲ့ပဲ ဆက်စပ် နေတာပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒီ ဆက်စပ်မှုဟာ မှန်ကန်တဲ့ ဆက်စပ်မှုတော့ ဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးတာပေါ့။
ှုIrrawaddy အင်တာဗျုးမှ ( 18.November. 2010)
နိုင်ငံရေးဆိုတာ ပါလီမန် အတွင်း နိုင်ငံရေး၊ ပါလီမန်အပြင် နိုင်ငံရေး ဆိုတာ အမြဲရှိတာချည်းပဲ။ အဲဒီတော့ အန်တီတို့က ပါလီမန်အပြင် နိုင်ငံရေး လုပ်တဲ့လူတွေ ဖြစ်မှာပေါ့။ အဲဒီတော့ အန်တီတို့ ပါလီမန် နိုင်ငံရေး အပြင်ဘက်မှာ လုပ်တဲ့လူတွေ ဆိုတာလည်း အန်တီတို့က သူတို့ နိုင်ငံရေး လုပ်ပုံလုပ်နည်းတွေ အမျိုးမျိုးနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီ ဆိုတော့ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ဆက်လုပ်သွားမှာပဲ။
အာဆီယံနဲ့ တရုတ်တို့ကို နီးနီးကပ်ကပ် ဆက်ဆံစေချင်တယ်။ အန်တီတို့နဲ့ ဆက်ဆံစေချင်တယ်။ အန်တီတို့က မဆက်ဆံသင့်တဲ့ လူမျိုးများမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာကို သေသေချာချာ သိစေချင်တယ်။
အခု တော်တော်များများက ဘလောဂ့်ဆိုက်တွေ လုပ်တာတို့၊ အင်တာနက်မှာ ဆက်နွှယ်တာတို့ ဘာတို့ လုပ်နေတယ် ဆိုတော့ ပြည်တွင်းကို မမေ့ဘူးလို့ ထင်တယ်။ အဲဒါကို အင်အား တခုအနေနဲ့ ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ ဆက်ပြီးတော့ ရပ်တည်ပေးမယ်လို့ ထင်တယ်။
အမျိုးသားရေးသည် တဦးတယောက်တည်း လုပ်ဆောင်၍မရဘဲ တနိုင်ငံလုံးရှိ ပြည်သူအားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်ကြောင်း၊ တမျိုး သားလုံး လုံခြုံရေး၊ လွတ်လပ်ရေး၊ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှု ကင်းဝေးစွာနေထိုင်နိုင်ရေး တို့အတွက် စည်းလုံးညီညွတ်မှု အရေးကြီး သည်။
(နှစ် ၉၀ ပြည့် အမျိုးသားနေ့ အခမ်းအနားတွင် ပြောဆိုလိုက်သည်။ ၁.Dec)
အပြောင်းအလဲလိုချင်ရင် အပြောင်းအလဲ ရအောင်ကြိုးစားရမယ်။
“ပြီးခဲ့တဲ့ အနှစ်နှစ်ဆယ်အတွင်းမှာ ကျမဘဝဟာ ကာလအပိုင်းအခြား နှစ်ခုအတွင်း ကျင်လည်နေခဲ့ပါတယ်။ တွေးတောပြီး အပြန်ပြန်အလှန်လှန် သုံးသပ်ခြင်း ဆိုတဲ့ ကာလအပိုင်းအခြားနဲ့ လုပ်စရာတွေ များလွန်းလို့ ပြေးလွှားနေတဲ့ အတွေးတွေကို ဆုပ်ကိုင်ဖို့ အချိန်မရနိုင်တဲ့ ကာလအပိုင်းအခြားပါပဲ”
ဒီနှစ်တွေထဲမှာ အတွေးတခု ဝင်နေတာက ဘယ်လို အခြေအနေမျိုးမှာ ဖြစ်ဖြစ် တိုးတက်မှုတခုရဖို့ ကျမတို့အားလုံး အတူတူ လက်တွဲ လုပ်ဆောင်ကြရမယ် ဆိုတာပါပဲ။ ဒါက လူသားဖြစ်တည်မှုနဲ့အတူ မွေးဖွားလာတဲ့ အတွေးအခေါ်ပါ။ အများနဲ့ လုပ်တာ အကျိုးရှိပါတယ်။ တဦးကိုတဦး ကူညီရိုင်းပင်းကြဖို့ ကြိုးစားကြရပါမယ်။ ဒါဟာ ဘယ်တော့မှ အိုမင်းဟောင်းနွမ်းသွားမယ့် အတွေးအခေါ် မဟုတ်ပါဘူး”
“ကျမကို လာရောက် အားပေးသူတွေ၊ နှုတ်ဆက်ဖို့ လာတဲ့ သူတွေနဲ့ ကျမတို့ လုပ်ဆောင်နေတာကို ဆက်လက်ယုံကြည်ကြောင်း ပြသသူတွေဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်များစွာက ကျမ အလုပ် တွဲလုပ်ခဲ့ဖူးသူတွေထက် ပိုပြီး ငယ်ရွယ်နေကြပါတယ်။ တကယ့်ကို မျိုးဆက်သစ်တွေပါ။ မျိုးဆက်သစ်ပေါင်း များစွာလို့ ကျမပြောပါရစေ။ ကျမတို့နဲ့ ပူးပေါင်းလာတယ်။ တကယ့်ကို နုပျိုနေတဲ့ ကမ္ဘာသစ်ပါပဲ”
“ကမ္ဘာကို ထိပ်တန်း အတွေးအခေါ်သမားအဖြစ် ဘာတွေ ပြောပေးနိုင်မယ်ဆိုတာ မသိပါဘူး။ ပြောနိုင်တာကတော့ ကျမဟာ ပြန်လည်မျှဝေပေးဖို့၊ အတွေးအခေါ်သစ်တွေ သင်ယူဖို့၊ လူငယ်တွေဆီက သင်ယူလေ့လာဖို့၊ ကျမ အကျယ်ချုပ်ကျခံနေရတဲ့ ကာလအတွင်း ဖြတ်သန်းခဲ့သူတွေဆီကနေ ဘာတွေ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို သင်ယူဖို့၊ ထပ်ဆောင်း ဆင်ခြင်မှုတွေကို သင်ယူဖို့ အသင့်ပါပဲ”
ဆင်ခြင်တွေးခေါ်ခြင်းသည် ပြီးဆုံးသည်၊ အဆုံးသတ်သွားသည်ဟူ၍ မရှိး၊ ဤသည်မှာပင် စိတ်ဓာတ်နှင့် နှလုံးသား၏ အဆုံးမရှိ ခရီးဆက်နေသော လူ့သဘာဝ၏ အလှတရားဖြစ်သည်။
Foreign Policy မဂ္ဂဇင်းကြီးသို့ ဗီဒီယိုမှတဆင့် ဂုဏ်ပြု အမှတ်တရ ပြောကြားရာ၌ (၃၀. November)
ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ နိုင်ငံရေးသမား ရှားပါးနေတဲ့ ခုအချိန်မှာ လူတွေက သူ့ (ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း) အပေါ် ယုံကြည်မှုရှိနေကြတာက အဓိကပါ။ ဒါကြောင့်လူတွေက ကျမအဖေကို သိပ်ချစ်ခင်ကြတယ်။ သူသာ အသက်ရှင်နေရင် သူတို့မှီခိုအားထားနိုင်တဲ့ ခေါင်းဆောင်လို့ ထင်ကြတယ်။
မဇ္ဈိမသတင်းထောက် Thea Forbes က နိုဝင်ဘာ ၂၉ ၊ ၂ဝ၁ဝ ပြည့်နှစ်တွင် လူချင်း တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းမှ။
မေး - ရှင်နဲ့ရှင်ရဲ့ပါတီက ဒုတိယ ပင်လုံညီလာခံခေါ်ဖို့ ပြောထားတယ်နော်။
ဖြေ - မဟုတ်ပါဘူး၊ ကျမတို့က ဒါကိုလုပ်ဖို့ တာဝန်ယူလိုက်တာပါ။ ဒါကိုစပြီး ဆောင်ရွက်တာ တိုင်းရင်းသား ပါတီတွေပါ။ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ခြေလှမ်းမဟုတ်ပါဘူး။ ကျမတို့ပါတီက ဒါကိုထောက်ခံခဲ့တာသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယ ပင်လုံညီလာခံ ကျင်းပရတဲ့ အကြောင်းက စစ်မှန်တဲ့ ပြည်ထောင်စု စိတ်ဓာတ်ကို ထူထောင်ဖို့ပါ။ ဒါကြောင့် ဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာ တတ်နိုင်သမျှ လူများများပါရေး ဆိုတာ ကျမတို့ ရည်မှန်းလုပ်ဆောင်နေတဲ့ အချက် ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိက,က စစ်မှန်တဲ့ ပြည်ထောင်စု စိတ်ဓာတ်ကို ထူထောင်ဖို့ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းက မတူကွဲပြားတဲ့ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုတွေအကြားမှာ ညီညွတ်ရေးရအောင် လုပ်ဆောင်ဖို့ပါ။
မေး - ဒီလိုဆို တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုအားလုံး တန်းတူညီမျှမှုရနိုင်မယ့် အနာဂတ် မြန်မာပြည် ထူထောင်နိုင်မယ့် အချိန်ကို မျှော်မှန်းကြည့်နိုင်ပါသလား။
ဖြေ - မျှော်မှန်းနိုင်တာပေါ့၊ ဒါကျမတို့ သွားနေတဲ့ ရည်မှန်းချက်ပဲ။
ညီညွတ်ရေးအတွက်ပထမခြေလှမ်းက သူများပြောတာ နားထောင်ဖို့ပါ။
မြန်မာပြည်လို တိုင်းရင်းသား လူမျိုးပေါင်းစုံ စုစည်းနေထိုင်တဲ့ နိုင်ငံမျိုးမှာ အထူးသဖြင့် အာဏာရှိနေတဲ့သူတွေ အနေနဲ့ သူတို့အသံတွေကို နားထောင်ဖို့လိုတယ်။
ညီညွတ်ရေးအတွက်ပထမခြေလှမ်းက သူများပြောတာ နားထောင်ဖို့ပါ။ မြန်မာပြည်လို တိုင်းရင်းသား လူမျိုးပေါင်းစုံ စုစည်းနေထိုင်တဲ့ နိုင်ငံမျိုးမှာ အထူးသဖြင့် အာဏာရှိနေတဲ့သူတွေ အနေနဲ့ သူတို့အသံတွေကို နားထောင်ဖို့လိုတယ်။ ဒီလိုနားထောင်မှ သူတို့ဘာလိုချင်တယ်၊ သူတို့မျှော်မှန်းချက်တွေကဘာ၊ သူတို့မျှော်လင့် ချက်တွေကဘာ၊ သူတို့ဘာကို စိုးရိမ်ကြတယ် ဆိုတာတွေ သိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုနားလည်လာမှ မတူကွဲပြားခြင်းတွေရဲ့ ညီညွတ်ရေး ဆိုတာအတွက် အခြေခံ အုတ်မြစ်ကိုချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျမတို့ ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်ခဲ့တာက ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို အယုံအကြည် မရှိလို့ပါ။ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေတွေဟာ လွတ်လပ်မျှတတယ်လို့ ကျမတို့မထင်လို့ပါ။ ထောင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ ကျမတို့ရဲ့ ရဲဘော်တွေကို မျက်ကွယ်ပြုပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ရတယ် ဆိုတာမျိုး ကျမတို့ မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဝင်မပြိုင်ဖို့ ကျမတို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။
ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဝင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့သူတွေ အတွက်တော့ ဒီပွဲမှာ သူတို့အောင်မြင်တယ် မအောင်မြင်ဘူးဆိုတာ သူတို့ဖာသာပဲ ထုတ်ဖော်ပြောရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လူထုအတွက် တကယ်ကိုအကျိုးရှိမယ့် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး တခြားဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ကျမတို့ ဘယ်သူမဆို လူတိုင်းနဲ့ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လိုပါတယ်။
ပြည်သူလူထုကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ အင်အားစုတွေနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ စစ်အစိုးရ ဆုံးဖြတ်ရမယ့်အချိန် မုချ ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့ ကျမထင်ပါတယ်။
အစိုးရ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်မှာ ပွင့်လင်းမှုရှိဖို့နဲ့ တာဝန်ခံမှုရှိဖို့ကို ကျမတို့ အမြဲတမ်းပြောနေ တောင်းဆိုနေခဲ့တာပါ။ အစိုးရအုပ်ချုပ်မှု စနစ်ကောင်းဆိုတာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိဖို့နဲ့ တာဝန်ခံမှုရှိဖို့ လိုပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီ အစိုးရတရပ် တက်လာရင် သူတို့ကို အရေးယူမှာလားလို့ စစ်တပ်က စိုးရိမ်နေတဲ့အကြောင်း လူတွေက ပြောကြပါတယ်။ သူတို့ လုပ်ခဲ့တာတွေအတွက် ပေးဆပ်ရမှာပေါ့ ဆိုတာမျိုးတွေလဲ ပြောကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါတွေက ရော်ရမ်းမှန်းဆ ပြောတာတွေပါ။
ဒီမိုကရေစီ အစိုးရတရပ် တက်လာရင် သူတို့ကို အရေးယူမှာလားလို့ စစ်တပ်က စိုးရိမ်နေတဲ့အကြောင်း လူတွေက ပြောကြပါတယ်။ သူတို့ လုပ်ခဲ့တာတွေအတွက် ပေးဆပ်ရမှာပေါ့ ဆိုတာမျိုးတွေလဲ ပြောကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါတွေက ရော်ရမ်းမှန်းဆ ပြောတာတွေပါ။ ခုလိုစိုးရိမ်မှုတွေ ရှိနေတာကြောင့်ပဲ တယောက်နဲ့တယောက် တွေ့ပြီး စကားပြောဖို့ လိုတာပေါ့။ ကျမတို့တိုင်းပြည်အတွက် တကယ်တမ်း ဘာတွေလိုချင်တယ် ဆိုတာ တွေ့ဆုံ ရှာဖွေဖို့ လိုတာပေါ့။
အတူတကွ လက်တွဲလုပ်ဆောင်ချင်တဲ့ ဘက်နှစ်ဘက်အနေနဲ့ တယောက်နဲ့တယောက် တဖက်ဖက်ကစပြီး စကားပြောဖို့ဟာ အရေးအကြီးဆုံးကိစ္စ မဖြစ်သင့်ဘူးလား။
ရှင်တို့ဘက်က တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး လုပ်ဖို့ ပြောလာတာကြာပြီ။ နအဖ ဘက်ကဘာမှ မတုံ့ပြန်ဘူး။ ဒါကို ခုအထိ ပြောနေတုန်းပဲလားလို့ ပြောကြတယ်။ လူသားမျိုးနွယ် တရပ်အနေနဲ့ ဘာမှတိုးတက်မှုမရှိဘူးလို့ လူတွေစိတ်ထဲ ခံစားမိပါသလား။ ဒါဆို လူသားရဲ့ အစကို ကျမတို့ ပြန်သွားကြရလိမ့်မယ်။ ဒီတုန်းက လူဝံတွေက ပြောမှာပေါ့။ မင်းတို့က ဘာလို့ ခြေနှစ်ချောင်းပေါ် မတ်မတ်ရပ်ပြီး လမ်းလျှောက်ဖို့ ကြိုးစားနေရတာလဲလို့။ မင်းတို့ဘယ်တော့မှ ဒီလိုဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောမှာပေါ့။ ခုကြည့် ကျမတို့လူသားတွေ မတ်မတ် ရပ်နိုင်နေပြီလေ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၇ နှစ်ကထက်စာရင် လူငယ်တွေ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ အင်တိုက်အားတိုက် ပါဝင်လာတာကို ကျမကိုယ်တိုင် တွေ့မြင်ရပါတယ်။
အပြောင်းအလဲအတွက် လုပ်ကိုင်တဲ့နေရာမှာ သူတို့ကိုယ်တိုင် ပါဝင်လုပ်ဆောင်ဖို့လိုတယ် ဆိုတာ ဒီလူငယ်တွေကောင်းကောင်း သဘောပေါက်နေတယ်လို့ ကျမတော့ ထင်ပါတယ်။
အပြောင်းအလဲအတွက် လုပ်ကိုင်တဲ့နေရာမှာ သူတို့ကိုယ်တိုင် ပါဝင်လုပ်ဆောင်ဖို့လိုတယ် ဆိုတာ ဒီလူငယ်တွေကောင်းကောင်း သဘောပေါက်နေတယ်လို့ ကျမတော့ ထင်ပါတယ်။ သူတို့ကိုယ်တိုင် မပါဘဲ ဘေးကနေ အသာထိုင်စောင့်ကြည့်နေပြီး အပြောင်းအလဲ တရပ် ပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မယ်လို့ သူတို့ မထင်တော့ပါဘူး။ ဒါသိပ်ကို ကောင်းတဲ့အချက်ပါ။ သိပ်ကောင်းတဲ့ အပြောင်းအလဲပါ။
စာချုပ်တွေကို ရပ်ဆိုင်းထားဖို့တို့၊ ရပ်တန့်ပစ်လိုက်ဖို့တို့ဆိုတာ ကျမတို့ တခါမှ မပြောဖူးပါဘူး။ ကျမတို့အမြဲပြောခဲ့တာက ဘာစာချုပ်တွေပဲချုပ်ချုပ် ပြည်သူလူထုအတွက် အကျိုးကျေးဇူးရှိဖို့၊ လုပ်ငန်းမှာ အကျိုးအမြတ်ရဖို့၊ ပြီးတော့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိဖို့နဲ့ တာဝန်ခံမှုရှိဖို့ ကိုပါ။
ကျမက ထိတွေ့ ဆက်ဆံမှု မူဝါဒကို ယုံကြည်တာကိုး။ လူတိုင်းနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံသင့်တယ်လို့ ကျမထင်ပါတယ်။ အိုဘားမားအစိုးရက စစ်အစိုးရနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာ ဒီလို ပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှုနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကို အတူတကွ ကျင့်သုံးသွားမယ်လို့ စပြောကတည်းက ကျမဒါကို လုံးလုံးသဘောတူပါတယ် ပြောခဲ့တာဘဲ။
ဒဏ်ခတ် ပိတ်ဆို့မှုတွေဟာ ပြည်သူလူထုကို တကယ်တမ်း ထိခိုက်မှု ရှိ မရှိ၊ ဒဏ်ခတ် ပိတ်ဆို့မှုရဲ့ အကျိုးတွေက ဘာတွေလဲ၊ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုပေါ် စီးပွားရေး အမြင်နဲ့ နိုင်ငံရေးအမြင် ဒါတွေရှိပါတယ် ပြန်သုံးသပ်သွားမှာပါ။
ပြည်သူလူထုကို ထိခိုက်စေတဲ့ ဒဏ်ခတ် ပိတ်ဆို့မှုတွေရှိရင် ဒါတွေကိုဖယ်ရှားရေးအတွက် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လိုတယ်လို့ နအဖကို ကျမတို့ လွန်ခဲ့တဲ့ တနှစ်လောက်က ကမ်းလှမ်း ပြောဆိုခဲ့ဖူးတာလဲ ရှင်သတိထားမိမှာပါ။ ဒီတော့ဒါဟာ မူဝါဒအသစ် မဟုတ်ပါဘူး။
မူဝါဒတွေ၊ ဒဏ်ခတ် ပိတ်ဆို့မှုတွေကို အခါအားလျော်စွာ ပြန်လည် သုံးသပ်သင့်တယ်ဆိုတဲ့ ဟာက ကျမတို့ အမြဲတမ်း ကိုင်စွဲထားတဲ့ မူဝါဒပါ။ ဒါကိုကျမတို့လုပ်မှာပါ။
အနုမြူအပြောင်းအလဲလို ကိစ္စမျိုးတွေကို ကျမတို့စပြီး မကိုင်တွယ်ခင် အခုထက်ပိုပြီး ကျမတို့မှာ စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မြင့်မားမား ရှိဘို့လိုတယ်လို့ ကျမထင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆို ဒီလိုကိစ္စမျိုးက လုံခြုံမှုရှိဖို့တို့၊ လုံခြုံရေးအရ ကြိုတင်သတိပြုရမယ့် အချက်တို့၊ စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားဖို့တို့ အများကြီးလိုတာကိုး။
အနုမြူအပြောင်းအလဲလို ကိစ္စမျိုးတွေကို ကျမတို့စပြီး မကိုင်တွယ်ခင် အခုထက်ပိုပြီး ကျမတို့မှာ စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မြင့်မားမား ရှိဘို့လိုတယ်လို့ ကျမထင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆို ဒီလိုကိစ္စမျိုးက လုံခြုံမှုရှိဖို့တို့၊ လုံခြုံရေးအရ ကြိုတင်သတိပြုရမယ့် အချက်တို့၊ စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားဖို့တို့ အများကြီးလိုတာကိုး။ ဒါကြောင့် ပွင့်လင်းမှုရှိဖို့နဲ့ တာဝန်ခံမှုရှိဖို့ဆိုတဲ့ ဘူတာပဲ ပြန်ဆိုက်တာဘဲ။ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုသာ မရှိရင် ဘာတွေ ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ ကျမတို့တကယ်ပဲ သိမှာမဟုတ်ဘူး။
ရွေးကောက်ပွဲအသစ် ပြန်လည် ကျင်းပ ပေးဖို့အတွက် တောင်းဆိုဖို့ စိတ်ဝင်စား တယ် ဆိုတာလဲ ကျမတို့ဘယ်တုံးကမှ မပြောခဲ့ပါဘူး။
စစ်အစိုးရဘက်က အထူးသဖြင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနဲ့ တာဝန်ခံမှုရှိဖို့ကိစ္စတွေမှာ အထူး လိုလိုလားလား ရှိနေတယ်လို့ ကျမ မထင်ပါဘူး။
စစ်အစိုးရဘက်က အထူးသဖြင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနဲ့ တာဝန်ခံမှုရှိဖို့ကိစ္စတွေမှာ အထူး လိုလိုလားလား ရှိနေတယ်လို့ ကျမ မထင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့ ကျမတို့က ဒါတွေကို တောင်းဆိုနေဖို့ မသင့်ဘူးလို့လဲ ကျမ မထင်ပါဘူး။
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ကျမတို့ဘက်က အမြဲတမ်း ကြိုးစားနေခဲ့တာပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဒီအကျဉ်းသားတွေ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ဒီချုပ်ဘက်က ဘာတွေလုပ်နေပြီလဲ မေးလာရင်တော့ ဒီလူတွေကိုလွှတ်ဖို့ မလွှတ်ဖို့က ကျမတို့ဘက်က လုပ်ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျမတို့ဘက်ကလုပ်ရမှာက ဒီလူတွေ အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက်လာဖို့ အာဏာပိုင်တွေကို ဖျောင်းဖျ သိမ်းသွင်းနိုင်မယ့် အခြေအနေ တရပ်ကို ဖန်တီးပေးဖို့ပါပဲ။
နိုဝင်ဘာလ ၁၇ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် မဇ္ဈိမသတင်းဌာန စီမံခန့်ခွဲမှု အယ်ဒီတာ ကိုစိန်ဝင်းက တယ်လီဖုန်းဖြင့် မေးမြန်းထားချက်မှ...
ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြစ်လာတဲ့ ဒီမိုကရေစီသာ မြန်မာပြည်နဲ့ ကိုက်ညီတယ်၊ မကိုက်ညီဘူးဆိုတာက အန်တီတို့ မြန်မာတွေ ဆုံးဖြတ်ရမယ့် ကိစ္စပါ။
အန်တီ့ရဲ့ သားတွေက မတောင့်မတ မကြောင့်မကြနဲ့ နေနိုင်တဲ့အနေအထားပေါ့နော်၊ လူ့အခွင့်အရေးအပြည့်အဝရတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ နေရတယ်၊ စားရေး သောက်ရေး နေရေးထိုင်ရေးအတွက် ပူပင်စရာမလိုဘူး၊ တခြားကလေးတွေ အများကြီးဟာ တနေ့နဲ့တနေ့ ဘယ်လို စားရမယ်၊ သောက်ရမယ်၊ နေရမယ်၊ ထိုင်ရမယ်ဆိုတာ မသိတဲ့အခြေအနေမှာ ရှိနေပါတယ်၊ သူ့တို့မိဘတွေကလဲ သူတို့ကလေးတွေကို မကူနိုင်တဲ့ အနေအထားမှာ ရှိတယ်၊ အဲဒီတော့ အန်တီ့အနေနဲ့ ဆိုးတယ် ပြောရအောင် တခြား မိဘတွေကို ဘယ်လို မျက်နှာနဲ့ သွားပြီးတော့ ကြည့်မှာလဲ။
မေး.....အန်တီ့လုံခြုံရေးအတွက် စိုးရိမ်ကြတယ်လို့ ပြောကြတယ်၊ အဲဒီအပေါ်မှာ တယောက်ယောက် အနှောက် အယှက် ပေးလိမ့်မယ်လို့ အန်တီ ထင်လား။
ဖြေ.....ဒါကတော့ အရင်တုန်းက အနှောက်အယှက်ပေးခဲ့တာတွေ ရှိခဲ့ဖူးတော့ မလုပ်ဘူးလို့လဲ ပြောလို့မရဘူးပေါ့၊ ဒါပေမဲ့ ဒါအနှောက်အယှက်ပေးမှာပဲလို့ ဒါကိုပဲ ရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့ ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်တာကိုင်တာတွေကို အဲဒီအပေါ်မှာ အခြေခံပြီးတော့ လုပ်လို့လဲ မဖြစ်ဘူးလေ။
အင်အားတွေကို အတ္တဟိတ သဘောနဲ့ ကိုယ့်အတွက်ပဲ ကိုယ်သုံးမယ်ဆိုရင်၊ ရေရှည်မှာ ကိုယ်လဲ အကျိုးမပေးဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကောင်းအောင်မလုပ်နိုင်လို့ရှိရင် ကိုယ်တယောက်ထဲ ကောင်းနိုင်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူး၊ ပြီးတော့ နိုင်ငံရေးလို့ပဲ ပြောပြော၊ လူမှုရေးလို့ပဲ ပြောပြော၊ အန်တီ့ရဲ့ အယူအဆကတော့ နိုင်ငံရေးနဲ့ လူမှုရေးဆိုတာခွဲခြားလို့မရပါဘူး
နိုင်ငံရေး ပြဿနာတွေကို ဆွေးနွေးပြီးတော့ အေးအေးချမ်းချမ်း အကြမ်းမဖက်တဲ့နည်းတွေနဲ့ ဖြေရှင်းတဲ့ နိုင်ငံရေး အစဉ်အလာတွေ အန်တီတို့မှာမရှိသေးဘူး၊
ပြည်သူတွေက ပြည်သူ့အတွက် ဒီမိုကရေစီ ကွန်ယက်ကြီးတခုဆောက်စေချင်တယ်၊ အဲဒီတော့ အဲဒီမှာဆိုရင် မဟာမိတ်တွေ အများကြီးရှိရမှာပေါ့၊
ပြည်သူတွေက ပြည်သူ့အတွက် ဒီမိုကရေစီ ကွန်ယက်ကြီးတခုဆောက်စေချင်တယ်၊ အဲဒီတော့ အဲဒီမှာဆိုရင် မဟာမိတ်တွေ အများကြီးရှိရမှာပေါ့၊ လူတိုင်းနဲ့ လက်တွဲနိုင်တာ မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တောင် ကိုယ်နဲ့ အဓိကကျတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တူတဲ့လူတွေနဲ့ တွဲပြီးတော့ လုပ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေဖြစ်အောင်လို့ အန်တီလုပ်ချင်တယ်။
ရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်တဲ့ ၃၇ ပါတီထဲက ဘယ်ပါတီပဲဖြစ်ဖြစ် တကယ်ပဲ အန်တီတို့နဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တူပြီးတော့ ဒီမိုကရေစီအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ချင်တယ်ဆိုရင် အန်တီတို့ကလဲ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ဖို့ အဆင်သင့်ပါပဲ။
ရန်ကုန်တိုင်း မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ သခင်သိန်းဖေ၏ နေအိမ်တွင် နိုဝင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့က အမျိုးသားပြန် လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများအဖွဲ့က ဦးစီးကျင်းပသော ၀ါရင့်နိုင်ငံရေးသမားကြီးများ သက်ကြီးပူဇော်ပွဲ တက်ရောက်စဉ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ ပြောဆိုချက်မှ... (၂၂. နိုဝင်ဘာလ. ၂၀၁၀)
“တော်လှန်ရေးဆိုတာက အပြောင်းအလဲကြီးတခုပဲ။ သိသာတဲ့ အပြောင်းအလဲကြီးတခုပဲ။ အဲဒီလို အပြောင်းအလဲတွေက ကျမတို့ ကမ္ဘာကြီးတည်သရွေ့ ရှိနေမှာပဲ။ ကျမတို့ အားလုံးမှာ တော်လှန်ရေး စိတ်ဓာတ်မွေးတယ်ဆိုတာက အဲဒါကို ပြောတာပဲ။ ခေတ်နဲ့ အညီ ကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ကို ဆုံးခန်းတိုင်အောင် ဆက်ပြီး ထမ်းဆောင်သွားချင်တဲ့စိတ်ပဲ”
“ ဒီနိုင်ငံကို မှီတင်း နေထိုင်သူ အားလုံး ဘာကိုလိုချင်လဲလို့ မေးလိုက်ရင် မမှားယွင်းဘဲနဲ့ ဖြေနိုင်တဲ့ အချက်တချက် ရှိပါတယ်၊ အားလုံးက ချမ်းချမ်းမြေ့မြေ့နဲ့ နေချင်ကြပါတယ်”
နှစ် ၉ဝ ပြည့် အမျိုးသား အောင်ပွဲနေ့သို့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
(ဒီဇင်ဘာလ. ၁. ၂၀၁၀)
” ဒီလို ချမ်းချမ်းမြေ့မြေ့နဲ့ နေနိုင်ဖို့ရာ ဘာတွေ လိုအပ်သလဲဆိုရင် လုံခြုံဖို့ လိုအပ်တယ်၊ လွတ်လပ်ဖို့ လိုအပ်တယ်။ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုနဲ့ ချို့တဲ့မှုတို့က ကင်းဝေးဖို့ လိုအပ်တယ်။ အဲဒါတွေအားလုံးအတွက် ကျွန်မတို့ ကြိုးစားရမှာပါ။
အမျိုးသားရေးဆိုတာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ အရေး မဟုတ်ဘူး။ အားလုံးရဲ့အရေး၊ နိုင်ငံ့ ဝန်ထမ်းတွေလဲ ပါတယ်။ နိုင်ငံ့ ဝန်ထမ်းဆိုတာမှာ တပ်မတော်သားတွေလဲ ပါတယ်။ ပါတီ အဖွဲ့အစည်းတွေလဲ ပါတယ်၊ တဦးချင်း ပုဂ္ဂိုလ်တွေ အားလုံး ပါဝင်တယ်”
“တမျိုးသားလုံး စည်းလုံးညီညွတ်စွာ ပါဝင်ကြိုးပမ်းရင် ထူးခြားတဲ့ အောင်ပွဲ မြန်မာနိုင်ငံ သမိုင်းမှာ ရစမြဲဘဲ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း၊ အခု ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်မှာ နိုင်ငံရေးပြေလည်ဖို့ လိုအပ်ဆုံးကတော့ အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေး ရဖို့ဘဲ ဖြစ်တယ် ”
( VOA တနင်္ဂနွေ, 21 နိုဝင်ဘာ 2010 )
ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ် အပြည့်အဝနဲ့ ဒီနိုင်ငံဟာ ငါတို့နိုင်ငံပေါ့နော်၊ ဒီမြေဟာ ငါတို့အတွက် သက်သာရာ၊ လုံခြုံရာ၊ ချမ်းသာရာမြေဆိုပြီးတော့ ပြည်ထောင်စု တိုင်းရင်းသားအားလုံးက အဲဒီလို စိတ်မျိုး မရှိနိုင်သရွေ့အန်တီတို့က မအောင်မြင်နိုင်သေးဘူးလို့ ပြောရမှာပဲ...
အခု နယ်စပ်မှာ နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကို နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ မဖြေရှင်းဘဲနဲ့ စစ်နည်းနဲ့ဖြေရှင်းမလိုလို ဖြစ် နေတာဟာ အန်တီတို့ နိုင်ငံအတွက် အင်မတန်မှ ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ်။ ဒါက မဖြစ်သင့်တဲ့ ကိစ္စပါ။
လမ်းပြမြေပုံဆိုတာကတော့ မြေပုံ အမျိုးမျိုး ရှိနိုင်တာပေါ့။ အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေးဆိုတော့ မရှိမဖြစ် တိုင်းပြည်ရဲ့ ကောင်းကျိုးအတွက် လိုအပ် တဲ့ကိစ္စပဲ။
ကျမတို့ရဲ့ ညီအကိုမောင်နှမ တွေ၊ ကျမတို့ရဲ့ သားသမီး တွေဖြစ်တဲ့ အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီ ဝေဒနာရှင်တွေကို ကူညီဖို့အတွက် ဝိုင်းပြီးတော့ လှူကြပါ။ ဝိုင်းပြီးတော့ ပံ့ပိုးပေးကြပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်။
“အမျိုးသားရေးဆိုတာ ဘယ်နှစ်ခါပဲ အောင်ပွဲခံခံ ပြီးသွားတယ်ရယ်လို့ မရှိဘူး။ အောင်ပွဲဟာ တခုပြီးတခု ဆက်ပြီးတော့ ခံသွားရမှာပဲ။ ဒီနိုင်ငံ တည်ရှိနေသ၍ အမျိုးသားရေးဆိုတာ တည်ရှိနေမှာပဲ။ အမျိုးသားရေး တည်ရှိနေသ၍ ဒီအမျိုးသားရေးတွေကို အောင်ပွဲခံနိုင်ဖို့ ကျမတို့ အားလုံးမှာ တာဝန်ရှိတယ်။
(နှစ် ၉၀ ပြည့် အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ အခမ်းအနားမှာ ပြောကြားသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။)
သားတို့အနေနဲ့ ညီညီညွတ်ညွတ် လုပ်ကြရမယ်နော်။ အပြင်က အဖွဲ့တွေက အကွဲကွဲအပြားပြားဖြစ်နေတယ်လို့ ခဏခဏ အပြောခံရတာ မကောင်းဘူးနော်။ တခါတလေမှာ နိုင်ငံရေးအရ နဲနဲ ကွဲပြားနေကြတာတွေကို လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေ အတူတူလုပ်ရင်းနဲ့ ရင်ကြားစေ့ကြလို့ ရှိရင် အခြေအနေတွေ ကောင်းလာလိမ့်မယ် လို့ ထင်ပါတယ်။
(မိုးမခ အင်တာဗျူးမှ... နိုဝင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၀)
NLD အဖွဲ့ချူပ်ကို မှတ်ပုံတင်ထားတာကို ဖျက်မယ်ဆိုတာဟာ ဥပဒေနဲ့ မညီဘူး။ ကျမတို့ ရှေ့နေတွေနဲ့ သေသေချာချာ တင်ထားတယ်။ ဥပဒေကြောင်းအရသာ ဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ အဖွဲ့ချူပ်ကို မှတ်ပုံတင် ရုပ်သိမ်းလို့ မရဘူး။ အဲဒါကို ကမ္ဘာတလွှားက ပညာရှင်တွေကနေပြီးတော့ ဒီဟာကို ထောက်ပြပြီးတော့ ဥပဒေအမြင်ကနေပြီးတော့ ထောက်ခံပေးတာကိုလည်း လုပ်ပေးစေချင်တယ်။ သားတို့လည်း လုပ်ပေးစေချင်တယ်။
ဆောင်ရွက်ကြရတဲ့နေရာမှလည်းပဲ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စတွေက ဘာနဲ့ စရမှာလဲ ဆိုတော့ နှစ်ဦး နှစ်ဖက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာနဲ့ စရမယ်။ အခုသုံးနေကြတဲ့ စကားကတော့ Exchange ပေါ့။ Engagement ပေါ့။ Exchange ရှိရမယ်။ Engagement ရှိရမယ်။ Exchange of Ideas ရှိရမယ်။ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးကြပြီးတော့မှ ကိုယ်ကနေပြီးတော့ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပြောရင် သူတို့နားလည်သဘောပေါက်မယ် ဆိုတာ အဲလိုဆုံးဖြတ်ရမှာပေါ့။
နိုင်ငံတကာအဆင့်နဲ့ကို Awareness ရှိလာအောင်လို့၊ ရှိနေအောင်လို၊့ အခြေအနေကို အများကနေပြီးတော့ ပိုပြီး သိလာအောင်လို့၊ ထောက်ခံလာအောင်လို့ လုပ်ကြတဲ့နေရာမှာ အပြင်က လုပ်ပေးနိုင်တာက အထဲမှာ အန်တီတို့ မလုပ်ပေးနိုင်တာ အများကြီး ရှိတယ်။
Sanction တွေကြောင့်မို့လို ဒီမှာ စီးပွားရေးအခြေအနေတွေ မကောင်းတာပါ လို့ပြောနေကြတာကလဲ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာကို ယုံတယ်။ ဒါကိုလည်း ထင်ထင်ရှားရှားပေါ်လွင်အောင်လည်း အန်တီတို့အနေနဲ့က လုပ်မယ်။ လူထုကို ထိခိုက်နေတာတွေ ရှိတယ် ဆိုရင်လည်း ကြည့်ပြီးတော့ ပြန်စဉ်းစားရမှာပေါ့။
လိုချင်တာတော့ သိပြီ လိုချင်တဲ့ ဟာကို ရအောင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ ဆိုတာ သိဖို့ ပိုပြီးတော့ အရေးကြီးတယ်။
ရွှေဂုံတိုင် မိန့်ခွန်းမှ ကောက်နုတ်ချက်မှ (နိုဝင်ဘာလ ၁၄ )
ကျွန်မတို့ လူငယ်တွေနဲ့ စကား ပြောတဲ့အခါ ကျရင် လူကောင်းရယ်လို့၊ လူဆိုးရယ်လို့ အဲဒီလို မယုံဘူး၊ အယုံ အကြည် မရှိဘူး၊ လူတော် ရယ်လို့ လူညံ့ ရယ်လို့ အယုံ အကြည် မရှိဘူး။ သင်လို့ ရတဲ့သူနဲ့ သင်လို့ မရတဲ့သူလို့ ကျွန်မမြင်ပါတယ် ကျွန်မတို့ ပြည်သူတွေ သင်လို့ရတယ်လို့ ကျွန်မတို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
လိုချင်ရုံနဲ့ မဖြစ်သေးဘူး၊ ကိုယ်လိုချင်တာရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ လုပ်တဲ့အခါ မှန်ကန်တဲ့နည်းနဲ့ လုပ်စေလိုပါတယ်။
ကျွန်မရဲ့အတွေ့အကြုံအရ မှန်ကန်တဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ မလုပ်လို့ရှိရင် ကိုယ့်ပန်းတိုင်က ဘယ်လောက်ပဲ ကောင်းပါစေ ပန်းတိုင်ပါ နောက်ကျတော့ ကွေ့ကောက်ပြီးတော့ ပျက်စီးသွားရတယ်။
အခု ပြည်သူတွေမှာ ပြည်သူတွေ မပါဘဲနဲ့ ဘာကိစ္စမှ မပြီးမြောက်နိုင်၊ မပြီးပြတ်နိုင်ဘူး ဆိုတာ အခု နားလည်နိုင်ပြီလို့ ကျွန်မ ထင်ပါတယ်။
ပြည်သူတွေ ကနေပြီးတော့ ပြည်သူတွေအတွက် ပြည်သူတို့ရဲ့ ဒီမိုကရေစီ ဆိုတဲ့နည်းတစ်ခုကို မြန်မာနိုင်ငံတင်မက တကမ္ဘာလုံးမှာတောင် ထပ်ပြီး ကြိုးစားကြည့်မှာပါ။
" ကျွန်မ အမြင်မှာတော့ နိုင်ငံရေး ဆိုတာ သင်ယူရေးပဲ သင်ယူရမယ်"
အလုပ်တွေ အများကြီး လုပ်ရမယ်။ အလုပ်မလုပ်ဘဲနဲ့ ဘာမှမရဘူး။ ကျွန်မတို့ ဗမာတွေက ကံပဲ ကံပဲလို့ ပြောလေ့ရှိတယ်။ အဲဒါကြောင့်ပဲ ကျွန်မတို့ လူငယ်တွေကို ထပ်တလဲလဲ ပြောရတယ်။ ကံဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို သိရဲ့လား ကံဆိုတာ ပြုလုပ်ခြင်းပဲ။ အဲတော့ ကံပဲ၊ ကံပဲဆိုတာ ခပ်တိုတို ပြောရရင် ကိုယ်လုပ်သလိုဖြစ်မှာပဲ အဲဒီတော့ ကိုယ်လုပ်တဲ့ အတိုင်းပဲ ဖြစ်မှာပဲ။ လိုချင်တာရှိရင် လိုချင်တာကို ရအောင်လို့ လုပ်ယူရမယ်။
ကျွန်မတို့က မဖြစ်နိုင်တဲ့ ကိစ္စတွေကို လုပ်ပေးပါ့မယ်လို့ လွယ်လွယ်နဲ့တော့ အဲဒီလို လာဘ်ပေးပြီးတော့ ကျွန်မတို့ ပြည်သူတွေကို မစည်းရုံးနိုင်ပါဘူး။ ကျွန်မတို့ ကြိုးစားမယ်။ ပြည်သူတွေ လိုချင်တဲ့ လမ်းကို အားလုံး အတူတူခင်းပြီးတော့ အားလုံး အတူတူ လျှောက်သွားနိုင်ဖို့ ကြိုးစားမယ်။
ဆက်သွယ်ရေး ဘက်မှာတော့ ကျွန်မတို့ အများကြီး တိုးတက်လာပါတယ်။ ဒီတိုးတက်မှုကို အများကောင်းကျိုး အတွက် တတ်နိုင်တဲ့ နည်းနဲ့ သုံးကြပါ။ ဆက်သွယ်ရေးအားဖြင့် ကျွန်မတို့ အချင်းချင်းမှာ နားလည်မှုရအောင် ကျွန်မတို့အချင်းချင်း ညီညွတ်မှု ရအောင် သုံးကြပါလို့ ပြောချင်တယ်။
(ဆိုင်းဘုတ်တွင် ရေးထားသည့်စာ - ကျွန်မကလဲ ပြည်သူတွေချစ်ပါတယ် အမှန်ခြစ် အောင်ဆန်းစုကြည်)
ကျွန်မတို့လေ တစ်နေ့ကျရင် ပြည်သူ့ဟစ်တိုင် တစ်ခုလုပ်ရမယ် အဲဒီတော့ အဲဒီမှာဆိုရင် ပြည်သူတွေက ပြောချင်တာ ပြောလို့ ရအောင်။ ကျွန်မတို့ကလည်း ပြည်သူတွေရဲ့ အသံတွေကို ကြားနိုင်မယ်။
တော်တော် ပင်ပန်းနေကြပြီပေါ့ ပင်ပန်းတယ် ဆိုတာက ကိစ္စမရှိပါဘူး။ ပင်ပန်းရကျိုးနပ်ဖို့က အရေးကြီးတာ။ ပင်ပန်းရကျိုးနပ်တယ် ဆိုရင် ဘယ်လောက် ပင်ပန်းရ ပင်ပန်းရ ရတယ် ခံနိုင်တယ်။ အဲတော့ ကျွန်မတို့ရဲ့ အားတွေကို ပင်ပန်းရကျိုး နပ်အောင်လို့ အသုံးချရမယ်။
ကျွန်မအခု ပြောချင်တာက စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့။ ကျွန်မတို့ရဲ့ တိုင်းပြည်ကို ကြည့်ပြီး စိတ်ဓာတ်ကျချင် ကြတာ ဖြစ်မှာပဲ။ ရှိမှာပဲ။ အခုထက်ထိ ဘယ်မှ မရောက်သေး ပါလား။ အခုထက်ထိ ဘာမှလည်း တိုးတက်မှုမရှိပါလားဆိုတဲ့ စိတ်တွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုစိတ်ပျက်စရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။ ကျွန်မတို့ ကြိုးစားရမယ်။ ဝီရိယဆိုတာဟာ အင်မတန်မှ အရေးကြီး ပါတယ်။ ခပ်ကြမ်းကြမ်းပဲ ဝီရိယထုတ်ရမယ်။
ဝီရိယဆိုတာဟာ အင်မတန်မှ အရေးကြီး ပါတယ်။ ခပ်ကြမ်းကြမ်းပဲ ဝီရိယထုတ်ရမယ်။
အလုပ်စလုပ်တဲ့ အခါမှာ ဝီရိယ ထုတ်ရမယ်။ အလုပ် အလယ်ပိုင်းရောက်တဲ့ အခါမှာ ဝီရိယ ထုတ်ရမယ်။ အလုပ် နောက်ဆုံးပိုင်း ရောက်ခါနီးမှာ ဝီရိယ ထုတ်ရမယ်။
အလုပ်ဆိုတာ ပြီးတယ်ရယ်လို့ မရှိဘူး။ အလုပ်တစ်ခု ပြီးရင်လည်း နောက်အလုပ်က ပေါ်လာမှာပဲ။
ကျွန်မအနေနဲ့တော့ ကျွန်မကတော့ လုပ်ပေးမယ်လို့ ကျွန်မ မပြောနိုင်ဘူး။ ပြည်သူရဲ့ ယုံကြည်မှုရှိရင်၊ ပြည်သူရဲ့ အားကိုးမှုရှိရင်၊ ပြည်သူရဲ့ ထောက်ခံမှုရှိလို့ ရှိရင် ကျွန်မမှာ လုပ်အားတွေ အများကြီးတက်လာမယ်။ အဲဒီလုပ်အားတွေနဲ့ ပြည်သူနဲ့ အတူလုပ်မယ်။
ကျွန်မတစ်ယောက်ထဲတော့ လုပ်လို့မရဘူး။ ကျွန်မတစ်ယောက်ထဲလဲ မလုပ်ချင်ဘူး။ တစ်ယောက်ထဲလုပ်တယ် ဆိုတာ ဒီမိုကရေစီ မဟုတ်ဘူးနော်။
ကျွန်မ တစ်ယောက်ထဲ လုပ်ဖို့ လုံးဝ ရည်ရွယ်ချက် မရှိဘူး။ အများနဲ့ အတူလုပ်မှာ။ ကျွန်မတို့ အပေါ်မှာ ကြင်နာမှု ရှိတဲ့ ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသားတွေနဲ့ အတူ လုပ်မယ်။ ကျွန်မတို့ အားလုံး အတူတူ လုပ်မယ်။
တစ်ချို့တွေ ထင်သလို လက်သီးလက်မောင်း တန်းပြီးတော့ ရှေ့ကနေ ပြီးတော့ ဟီးရိုးကြီး လုပ်တာ။ အဲဒါမျိုးက သတ္တိ မဟုတ်ဘူး။
သတ္တိ ဆိုတာဟာ စိတ်ဓာတ် ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ကိစ္စကို ဖြစ်မြောက်အောင်လို့ ပင်ပန်းခံပြီးတော့ လုပ်နိုင်တာ။ ဒါမှ အဲဒီလို သတ္တိမျိုးတွေ မွေးရမယ်။ တကယ်တော့ သတ္တိဆိုတာ နိစ္စဓူဝ လုပ်နေရမှာ။
နိုင်ငံရေးဟာ ဒို့နဲ့ မဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို မထားပါနဲ့။
နိုင်ငံရေးဟာ ဒို့နဲ့ မဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို မထားပါနဲ့။ ဒါဖေဖေ အရင်ကတည်းက ပြောခဲ့ပါတယ်။ လွပ်လပ်ရေး မရခင်ကတည်းက ပြောခဲ့တဲ့ စကားပါ။ နိုင်ငံရေးဟာ ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်ဘူးလို့ ပြောနေပေမယ့် နိုင်ငံရေးက လာပြီးတော့ ဆိုင်နေလိမ့်မယ်တဲ့ ရှောင်နေလို့မရဘူး။ အားလုံးဟာ နိုင်ငံရေးပဲ။
" အားလုံးဟာ နိုင်ငံရေးပဲ။"
ကျွန်မတို့ ပြည်သူတွေဟာ နိုင်ငံရေးကို နားလည်အောင် လုပ်ပါ။ ကျွန်မတို့လည်း သင်ပေးပါ။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် သင်ယူရမှာ။ ပြည်သူကနေ ကျွန်မတို့ ဒီမိုကရေစီအတွက် လှုပ်ရှားနေတဲ့သူတွေကို သင်ပေးမှ ကျွန်မတို့လည်း မမှားမှာ။
ဒီမိုကရေစီမှာ အရေးကြီးတဲ့ တစ်ခုက ဘာလည်း ဆိုတော့ အရှေ့ကနေပြီးတော့ လုပ်နေတဲ့သူတွေကို အနောက်ကလူတွေက ထိန်းနိုင်ရမယ်။ ထိန်းပိုင်ခွင့် ရှိရမယ်။ အဲဒါဒီမိုကရေစီပဲ။
ပြည်သူတွေရဲ့၊ ပြည်သူတွေ ထိန်းတာကို ကျွန်မတို့တွေ ခံပါ့မယ်။ ပြည်သူမဟုတ်ဘဲ ထိန်းသိမ်းတာကို သိပ်မခံချင်ဘူး။
ကျွန်မတို့ဟာ ပြည်သူ အချင်းချင်းမှာ တစ်ယောက်ပေါ်မှာ တစ်ယောက် စေတနာထားနိုင်အောင်လို့ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ကျေးဇူးတင် နိုင်အောင်လို့။ မြင်နိုင်စေချင်တယ်။
ပြည်သူကို အားကိုးပြီး လုပ်တယ်ဆိုရင် ပြည်သူနဲ့ အမြင်ချင်း ဖလှယ်ထားရမယ်။
ပြည်သူကို အားကိုးပြီး လုပ်တယ်ဆိုရင် ပြည်သူနဲ့ အမြင်ချင်း ဖလှယ်ထားရမယ်။ ကျွန်မကတော့ ဒီ--ဒီ ပြည်သူတွေကြားမှာ ကျွန်မတို့က အားလုံးကြားမှာပေါ့နော် အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေး ကိစ္စကို ဆက်ပြီးတော့ လုပ်သွားမှာပါ။ ဒါဟာ အရေးကို ကြီးတယ်။
ပြည်သူ သဘောမတူပေမယ့်လည်း ဘာဖြစ်လို့ လုပ်ရတာလည်း ဆိုတော့ ပြည်သူကို စည်းရုံး ယူရမှာပေါ့။ စည်းရုံးတယ် ဆိုတာ ဒါပဲလေ။ ပြည်သူရဲ့ ယုံကြည်မှု၊ နားလည်မှု အဲဒါကို ရအောင် လုပ်မယ်။ မဲရအောင် လုပ်တာ မဟုတ်ဘူး။
ရင်ကြားစေ့ရေးအတွက် လုပ်သွားပြီးတော့ ပြည်သူတွေ အနည်းဆုံး နာမယ့်နည်းနဲ့၊ လုံးလုံး မနာဘူးလို့ လည်း ကျွန်မမပြောနိုင်ဘူး။ ဒါက ဒီလို ကျွန်မ အာမခံလိုက်လို့ရှိရင် ဒါလည်း လာဘ်ပေးတာတစ်မျိုးပဲ။ ကျွန်မတို့နဲ့ လိုက်လို့ မနာစေရဘူး ဆိုတာ အဲဒီလိုလည်း ကျွန်မပြောလို့ မရဘူး။ နာချင်လည်း နာတာပဲ။ ကျွန်မတို့လည်း ခံရတာပဲ။ ကျွန်မတို့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေလည်း ခံရတာပဲ။ ဒါပေမယ့်လည်း ပြည်သူလူထု အနည်းဆုံး နာမယ့်နည်းတွေကို ကျွန်မတို့ ရှာပြီးတော့ လုပ်ပါ့မယ်။ ပြည်သူကလည်း တစ်ခါတစ်လေ နည်းနည်း အနာခံရမယ် ဆိုရင်တော့ သည်းခံပြီး အနာခံပါလို့။ ကျွန်မ အခုကတည်းက ပြောထားချင်ပါတယ်။ လိုတော့ လိုချင်ပါတယ်။ အနာတော့ မခံချင်ပါဘူး။ အဲဒီလိုတော့ မလုပ်နဲ့။
အမှားနဲ့ အမှန်ကို ခွဲခြားပြီးတော့ သိရမယ်။ အမှန်ဘက်ကနေ ရပ်တည်ရဲတဲ့ သတ္တိရှိရမယ်။ အမှားနဲ့ အမှန်ဆိုတာ တစ်ချိန်နဲ့ တစ်ချိန်နဲ့ တူတာမဟုတ်ဘူး။ အချိန်တွေ ပြောင်း သလို အခြေအနေတွေ ပြောင်းသလို အဖြေတွေကလည်း ပြောင်းနေတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီဟာကို လုပ်သင့်တာ မလုပ်သင့်တာကတော့ ဆင်ခြင်ပြီးတော့ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ လိပ်ပြာ၊ ဒါဘယ်လိုပြောသလဲ ဖေဖေပြောခဲ့တဲ့ စကား တစ်ခွန်းရှိပါတယ်။ သူ့လိပ်ပြာရဲ့ ခုံရုံးရှေ့မှာ သူ မားမားမတ်မတ် ရပ်ပြီးတော့ အစစ်ခံရဲတယ်တဲ့။
သည်းခံနေတာ ကြာပြီဆိုတော့ မဟုတ်တဲ့ဟာတွေကို သည်းခံနေတာလား။ သည်းခံသင့်တာတွေကို သည်းခံနေ တာလား။
အင်အားဆိုတာ မှန်မှန်ကန်ကန် သုံးမှတကယ့်ကို အဖိုးတန်တာ ၊ မှန်မှန်ကန်ကန် သုံးတဲ့ အင်အားရဲ့ အာနိသင်ကို ဘယ်သူမှ ဖြိုလို့မရဘူး။
ကျွန်မယုံကြည်တာ လူ့အခွင့်အရေးကို ယုံကြည်တယ်။ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးကို ယုံကြည်တယ်။ အဲဒါတွေ အတွက်တော့ကျွန်မ အမြဲတမ်း လုပ်ဆောင်သွားမှာပါ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ဘယ်သူ့ကို မုန်းလို့၊ ဘယ်ဝါ့ကို မုန်းလို့ ဆိုပြီးတော့ လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ အဲဒီစိတ်တွေ ကျွန်မမရှိဘူး။ အချိန်လည်း မရှိဘူး။
ကျွန်မလိုပဲ ပြည်သူတွေအပေါ်မှာ အကျယ်ချုပ်ချပြီးတော့ မဆက်ဆံစေချင်ဘူး။
လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကျေးဇူးကို ပွဲထုတ်ရတာလောက် အင်မတန်မှ အားရစရာ ကောင်းတာ မရှိဘူး။ အင်မတန်မှ အားရစရာ ကောင်းတယ်။ အင်မတန်မှ ကျေနပ်စရာကောင်းတယ်။
ကျွန်မတို့ ဗမာတွေရဲ့ သတ္တိက ကောက်ရိုးမီးလိုပဲလို့ ခဏခဏ ပြောတာ ကျွန်မ လုံးဝ မကြိုက်ဘူး။ အဲဒါဟာ ကျွန်မတို့ ဖြစ်သင့်တဲ့ ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ အဲဒီလို မဖြစ်ရဘူး။
လူဆိုတာ လူဖြစ်ကာမှ လူပီပီနေရတယ်။ လူ့သိက္ခာ ဆိုတာရှိတယ်။ လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်းမှာ ဘာနဲ့ စလဲဆိုတော့ လူတိုင်း၊ လူတိုင်းဟာ မွေးရာပါ ဂုဏ်သိက္ခာရှိတယ်။ အဲဒီ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိန်းသိမ်းရမယ်။
ကျွန်မတို့ တိုးတက်ရေးအတွက်၊ ကိုယ့်ရပိုင်ခွင့်တွေကို လိုချင်တယ်လို့ ကျွန်မတို့ ယုံကြည်တယ်။ ကိုယ့်တိုးတက်ရေးအတွက် လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ ရအောင်လို့ ကျွန်မတို့ လုပ်ပေးရမယ်။
အားလုံးကို လိုက်ပြီးတော့ ထမင်းဝေဖို့ မဟုတ်ဘူး။
ကိုယ့်ထမင်းကိုယ် ဝအောင် ရှာနိုင်တဲ့ အရည်အချင်းတွေ၊ အခွင့် အလမ်းတွေ ရှိဖို့။
ပြည်သူတွေ မဝန်းရံဘဲ ကျွန်မတို့ ဘာမှ လုပ်လို့မရဘူး။ ပြည်သူတို့ အကူအညီကိုလိုလို့ ကျွန်မတို့ တောင်းတယ်။ တောင်းတဲ့ အခါကြရင် ကျွန်မတို့ အပေါ်မှာ ယုံယုံကြည်ကြည် လိုလိုလားလားနဲ့ ဒီအင်အားတွေနဲ့ ပံ့ပိုးပေးပါလို့။ အခုကတည်းကနေ မေတ္တာရပ်ခံထားပါတယ်။
အားတွေ မွေးထားကြ။ ကိုယ်ကိုကိုယ် - စိတ်အားရော၊ ခန္ဓာကိုယ်အားရော မွေးထားကြ။ အဲဒီအားတွေနဲ့ ကျွန်မတို့ အတူတူ လက်တွဲပြီးလုပ်မယ်။
ကျွန်မတို့ လူတွေထဲမှာ ပန်းတိုင်ရောက်တဲ့ဟာကို မမြင်လိုက်ရတဲ့သူတွေ အများကြီးပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒီမှန်ကန်တဲ့ ပန်းတိုင်ကို ရည်မှန်းပြီး လျှောက်သွားရတယ်ဆိုတဲ့ ဘဝတစ်ခုရဲ့ တန်ဖိုးက ဘယ်လိုမှ ဖြတ်လို့ မရဘူး။
လူတိုင်းက အနိစ္စသဘော မကင်းပါဘူး။ တစ်နေ့ကျ ကိစ္စပြီးသွားမှာပဲ။ ဒါပေမယ့် မပြီးခင် အချိန် အတွင်းမှာ အနည်းဆုံး ကိုယ်ဘယ်လို နေခဲ့တယ်။ ထိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာ သိကြဖို့။ ကျွန်မတို့ တွေ့တုန်းမှာ ကျွန်မတို့ရဲ့ ကွယ်လွန်သွားတဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ၊ ဒီမိုကရေစီရဲဘော်ရဲဘက်တွေ ကို ကျွန်မ ဂုဏ်ပြုချင်တယ်။ အခု အထိပြင်းပြနေကြတဲ့ ကျွန်မတို့ရဲ့ ဒီမိုကရေစီ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၊ ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကို ဂုဏ်ပြုချင်တယ်။
အကြံပြုသူများ.....ဘလော့ခ်ဂါ ဒီမိုဝေယံ နှင့် ခမိခဆဲ
Posted by အလင်းဆက် at 12:32 AM 1 comments
ဖိလစ်ပိုင် အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး ဟိုဆေးရီဇော် (Dr. José Rizal) ၏ သမိုင်းတင် အဆိုအမိန့်များ
Filipino patriot, medical doctor and man of letters
ကျွန်တော် အလယ်တန်းကျောင်းသားဘဝကတည်းက လေးစားအားကျခဲ့ရသော ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များတွင် တဦးအပါအဝင်ဖြစ်သော ဖိလစ်ပိုင် အမျိုးသားအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး ဒေါက်တာ ဟိုဆေးရီဇော် ( Jose Rizal) ၏ဘဝနှင့် ဒဿနမှ စိတ်ဝင်စားဖွယ်၊ အဖိုးတန်ပြီး ခွန်အားတက်စေသောအတွေးအခေါ်များကို ရှာဖွေ၊ လေ့လာ၊ စုဆောင်းပြီး နိမ့်ပါးသောဥာဏ်ရည်ဖြင့် ဘာသာပြန် တင်ပြ လိုက်ပါသည်။
လူဆိုတာ ခက်ခဲနက်နဲတဲ့တာဝန်တွေကို ကြီုးပမ်းထမ်းဆောင်ဖို့ ကမ္ဘာပေါ်ရောက်လာတာ။ ကိုယ့်အသက်အန္တာရယ် ဖြစ်မှာကြောက်လို့ ဒီတာဝန်တွေကို တိမ်းရှောင်နေရင်း လူ့ပြည်မှာ လူဖြစ်ရကျိုး နပ်ပါတော့မလား။
လူဆိုတာ တသက်မှာ တခါဘဲသေတယ်။ ဒီလို နှစ်ခါပြန်မရတဲ့ ရတောင့်ရခဲ အခွင့်ထူးမျိုးကို အမိနိုင်ငံအတွက်သာ အသုံးချသင့်တယ်။
သေနေတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတရပ်မှာ လူတယောက်သေသွားလို့ကော ဘာများပိုထူးခြားသွားမှာလဲ။
ဂျုပီတာ (Jupiter) သည် သူချေမှုန်းချင်သော ရန်သူကို ပထမဦးစွာ ရူးသွပ်အောင်ပြုလုပ်သည်' ဆိုတဲ့ စကားပုံတခု ရှိခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော့်စာအုပ်ကို ရိုက်ပြီးရင် နိုင်ငံခြားကနေ ဖြန့်လို့လည်းရပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်လိုက်လို့ ကျွန်တော့်စာအုပ်ရဲ့ လေးနက်မှု လျော့သွားမှာပေါ့။ တန်ဖိုးမရှိ ဖြစ်သွားမှာပေါ့။ ရီဇော် တယောက်စာအုပ်ထဲမှာ ရေးထားလိုက်တာ ရဲရဲတောက်လို့။ ဒါပေမယ့် လူကိုယ်တိုင်ကတော့ သေမှာကြောက်လို့ နိုင်ငံခြားက ပြန်မလာရဲရှာဘူးလို့ ဖိလစ်ပိုင်ပြည်သူတွေက ရယ်သွေးကြမှာပေါ့။ ဒီအဖြစ်မျိုးကိုတော့ ကျွန်တော် လုံးဝ အဖြစ်မခံနိုင်ဘူး။
(သူ၏ " Noli Me Tangere " (ပျောက်ဆုံးနေသော သုခဘုံ ) ဝတ္ထုစာအုပ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သူ့မိတ်ဆွေ Maximo Viola အားပြောပြချက်မှ)
Letter to Blumentritt (13 April 1887)
ပန်းတွေ၊ သံလွင်ခက်တွေနဲ့ သရဖူများဟာ လွတ်လပ်သူတွေရဲ့ တီထွင်မှုများသာဖြစ်သည်။
Crowns of flowers and laurels are the inventions of free people. But perhaps your children may gather the fruit of what the father planted. Letter to Blumentritt (13 April 1887)
ပန်းတွေ၊ သံလွင်ခက်တွေနဲ့ သရဖူများဟာ လွတ်လပ်သူတွေရဲ့ တီထွင်မှုများသာဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် အဖေစိုက်ခဲ့တဲ့ အပင်ကသစ်သီးတွေကို သားသမီးတွေ ဆွတ်ခူးနိုင်ကောင်းနိုင်ပါလိမ့်တယ်။
လူတွေဟာ သူတို့၏ အခါအခွင့်အရ သမိုင်းကိုရေးကြတာပါ။
We want the happiness of the Philippines, but we want to obtain it through noble and just means. If I have to commit villainy to make her happy, I would refuse to do so, because I am sure that what is built on sand sooner or later would tumble down.
Letter to Blumentritt, (31 January 1887)
ကျွန်တော်တို့ဟာ ဖိလစ်ပိုင်လူမျိုးတွေ ပျော်ရွှင်တာကို လိုချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မြင့်မြတ်ပြီး တရားသောနည်းလမ်းနဲ့သာ အလိုရှိပါတယ်။ ပျော်ရွှင်မှုအတွက် ယုတ်မာသောနည်းလမ်းကို ကျုးလွန်မိပါက ကျွန်တော်ခွင့်ပြုလက်ခံလိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် 'သဲပေါ် ဆောက်လုပ်တဲ့ အဆောက်အဦးမှန်သမျှဟာ အနှေးနဲ့အမြန် ပြိုပျက်မှာ မို့လို့ပါဘဲ။
လူတယောက်ဟာ တခါသာသေရမယ်။ ကောင်းသောသေခြင်းမဟုတ်ရင် အခွင့်အရေးကောင်းတခု ဆုံးရှုံးရသလို၊ နောက်တကြိမ်လည်း ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။
Letter to his family, Dapitan (c. 1884)
ရှင်သန်ခြင်းဆိုတာဟာ လူတွေကြားမှာ နေထိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ လူတွေကြားနေထိုင်ခြင်း ဆိုသည်မှာ ရုန်းကန်မှုတခုသာဖြစ်သည်။ ရုန်းကန်မှုတွင် မိမိကိုယ်တွင်း များသာမက တပါးသူတွေရဲ့တပ်မက်လိုချင်မှုများလည်းပါသည်။
Toast to the artists Juan Luna and Felix Hidalgo: Madrid, Spain (25 June 1884)
ပါရမီတွင် နိုင်ငံမရှိပေ။ နေရာဒေသအားလုံးတွင် ပွင့်ဖူးသည်။ ပါရမီဆိုတာ အလင်းရောင်နဲ့တူတယ်။ လေနဲ့တူတယ်။ အဲဒါဟာ အာလုံးရဲ့ အမွေအနှစ်ဘဲ။
"Laughter and Tears", an essay (c.1884)
လူ့လောကဆိုတာ တပါးသူတွေကို တားမြစ်ပိတ်ပင်နိုင်ဖို့ လူတချို့ကို အခွင့်အာဏာတွေပေးထားတဲ့ လောကတခုပါ။ လူတယောက်ဟာ အဝေးကကျယ်ပြန့်တဲ့ မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းကိုသာမြင်နိုင်တဲ့ အကျဉ်းခန်းလေးကို ကိုယ်တိုင်ဒရွတ်တိုက်သွားရဲတဲ့အခါ။ နှလုံးသားရဲ့ စည်းချက်သံကို ခံစားနိုင်တဲ့အခါ။ စိတ်ကူးအိမ်မက်ရဲ့ အလှတရားကို ခံစားနိုင်ဖို့ ကိုယ်တိုင်ယုံကြည်လာတဲ့အခါမှာတော့ ခွန်အားတွေ၊ လေ့လာသင်ယူလိုစိတ်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။
"Como se gobiernan las Filipinas" (How one governs in the Philippines), published in La Solidaridad (15 December 1890)
ဖိလစ်ပိုင်လူမျိုးတွေအနေနဲ့ အောင်ပွဲဆိုတာဟာ တော်လှန်ရေးရဲ့ကလေးငယ်လို့ သဘောမထားပါဘူး။ အောင်ပွဲဆိုတာဟာ ဒုက္ခခံစားမှုမှ ပေါက်ဖွားလာတဲ့ ပျော်ရွှင်မှုဖြစ်တယ်။ ပြန်လည်ရယူနိုင်ခြင်းဆိုသည်မှာ စွန့်လွတ်အနစ်နာခံခြင်း၏ ထုတ်ကုန်တခုဖြစ်သည်။
"Song of the Wanderer", st.8 - translated by Nick Joaquin.
လောကကြီးဟာ တပါးသူရဲ့ နာကျင်မှုကို ရယ်မောနေနိုင်တယ်။
Not all were asleep during the night of our forefathers!
ကျွန်ုပ်တို့ ဘိုးဘေးဘီဘင်တွေလက်ထက် ညတွေမှာ လူအားလုံး အိပ်ပျော်နေခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။
မင်းဆိုးမင်းယုတ်မရှိတဲ့နေရာမှာ ကျေးကျွန်တွေဆိုတာလည်း မရှိပါဘူး။
ကြီးမြတ်တဲ့စံနမူနာ မလုပ်နိုင်တဲ့ ဘဝတခုဟာ အကျိုးမဲ့သော လူ့ဘဝတခုပါဘဲ။
You must shatter the vase to spread its perfume, and smite the rock to get the spark.
သင်ဟာ ရေမွှေးနံ့တွေ မွှေးပျံ့စေဖို့ ဗူးကို လှုပ်ရမယ်။ မီးစတခုရဖို့အတွက် ကျောက်ခဲကို ခတ်ရမယ်။
The school of suffering tempers the spirit, the arena of combat strengthens the soul.
ခံစားမှုဒုက္ခ အစုအဝေးဟာ စိတ်ဓါတ်ကို သက်သာစေတယ်။ တိုက်ပွဲမြေဟာ စိတ်ဝိညာဉ်တွေကို ခိုင်မာစေတယ်။
တိုင်းပြည်ကိုတယ်တင်ခြင်းဆိုတဲ့ ဂုဏ်ကျက်သရေဟာ တိုင်းပြည်ပျက်အောင်လုပ်နေသူတွေ
After all this, you still speak ill of us!
ဒါတွေအားလုံးပြီးသွားရင်လည်း ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော်တို့ မကောင်းကြောင်း ပြောဆိုနေကြအုံးမှာပါ။
(in Tagalog: "Ang hindi marunong lumingon sa pinangalingan ay hindi makakarating sa paroroonan.")
ကိုယ်ဘယ်နေရာကလာတယ်ဆိုတာကို ဘယ်လိုပြန်ကြည့်ရမယ်လို့ မသိသူဟာ ဘယ်တော့မှ သူ့ပန်းတိုင်အဆုံးကို ရောက်မှာမဟုတ်ဘူး။
လူငယ်တွေဟာ ကျွန်တော်တို့အနာဂါတ်ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေပါ။
"To My__" (December 1890)
ချစ်ခင်ကြင်နာရမယ့်သူတွေ များများရှိသူတွေဟာ များများခံစားကြရတယ်။
ရွံ့ဗွက်အိုင်ကနေ ရေကောင်းမရနိုင်ဘူး။ အခါးပင်က အချိုသီးမရနိုင်ဘူးဆိုတာ သိစေချင်တယ်။
Letter to the Young Women of Malolos (22 February 1889) - translated from Tagalog by Gregorio Zaide
"Indolence of the Filipino" in La Solidaridad (1890)
လူတွေဟာ ပိတ်ပင်တားမြစ်ဖို့ လုပ်ကြတယ်။ ဒီပိတ်ပင်မှုတွေကို ဖယ်ရှားပြီး၊ မလှုပ်မရှားနိုင်ဖြစ်အောင် လုပ်ရမယ်။
လူတွေဟာ သူတို့ပိုင်ဆိုင် ပြောဆိုကြသော ဘာသာစကားများကြောင့် အစိတ်အစိတ်အပိုင်းပိုင်း ပြုခြင်းခံနေကြရတယ်။
ကောင်းမြတ်ခြင်းဟာ အလယ်အလတ်ဖြစ်သောမြေ မှာဘဲရှိတယ်။
ခရီးသွားခြင်းဟာ ကလေးဘဝတုန်းကတော့ စိတ်ကူးပေါ်၍လုပ်တဲ့ အလုပ်တခုသာဖြစ်သည်။ အရွယ်ရောက်ချိန်မှာတော့ စိတ်ခံစားမှုတခုဖြစ်သည်။ လူကြီးဖြစ်ချိန်မှာတော့ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာတခု ဖြစ်ပြီး၊ အိုမင်ရင့်ရော်ချိန်မှာတော့ လွမ်းချင်း တပုဒ်သာဖြစ်သည်။
"The Philippines: A Century Hence"
တရားဥပဒေမှာ အရေခံမရှိဘူး။ ဆင်ခြင်တုံတရားမှာ နှာခေါင်းပေါက်မရှိဘူး။
"Mi Ultimo Adios" st. 13 - poem written on the eve of his execution (29 December 1896) - translated from the Spanish by Charles Derbyshire.
ကျေးကျွန်၊ ကြိုးပေးခံရသူ၊ ဖိနှိပ်သူမရှိသော အရပ်ဒေသသို့ ကျွနိုပ်သွားရပါလို၏။ ယင်းအရပ်တွင် သစ္စာတရားတို့သည်လည်း မတိမ်ကော၊ စိုးမိုးအုပ်ချုပ်သူသည် အဖဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင် ဖြစ်ပါစေ။
Truth does not need to borrow garments from error.
အမှန်တရားလုပ်သူသည် အမှားလုပ်သူတွေထံမှ အဝတ်အစားငှားယူစရာ မလိုပေ။
Fate presented itself to some likeachinese fan--one side black, the other side gilded with flowers.
ကံတရားဆိုတာ တရုတ်ယပ်တောင်တခုလိုပါဘဲ။ တဖက်မှာ မဲနက်နေပေမယ့် တခြားဖက်မှာ ပန်းတွေနဲ့ ခြယ်မှုန်းထားတာပါ။
-- José Rizal, quote inscribed in Fort Santiago
တိုင်းပြည်တပြည်ရဲ့ ကံကြမ္မာကို ကြိုတင်ပြောချင်ရင် ယင်းတိုင်းပြည်ရဲ့ အတိတ်သမိုင်းကို မှန်မှန်ကန်ကန်သုံးသပ်ရေးပြထားတဲ့ စာအုပ်တွေကို ပြန်ဖတ်ဖို့ အထူးလိုအပ်တယ်။
"I wish to show those who deny us patriotism that we know how to die for our duty and convictions."
မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ်ကို လက်မခံသူတွေကို ကွန်တော် ဖော်ပြချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တာဝန်နဲ့ ယုံကြည်ချက်တွေအတွက် ဘယ်လိုသေရမယ်ဆိုတာ သိသူတွေပါ။
(in Tagalog: "Ang hindi magmahal sa sariling wika, daig pa ang hayop at malansang isda.")
ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင် ဘာသာစကားကို မမြတ်နိုးသူတွေဟာ အဟိတ်တိရစ္ဆာန်တွေ ငါးပုတ်တွေထက် ပိုမိုဆိုးရွားပါတယ်။
"Whileapeople preserves its language; it preserves the marks of liberty."
လူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ဘာသာစကားကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းဟာ လွတ်မြောက်မှု အမှတ်အသားကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
နေဝန်းနီထွက်ပြူလာတာ မမြင်ရမီ ကျုပ်သေခဲ့ရတယ်။
ခင်ဗျားတို့က နေဝန်းနီကို ကြီုဆိုကြပါ။
ကျဆုံးခဲ့ရတဲ့ ရဲဘော်တွေကို မမေ့ကြပါနဲ့။
(နောက်ဆုံး နှုတ်ဆက်လွှာ ကဗျာမှ)
Posted by အလင်းဆက် at 12:09 AM0comments
အာဇာနည် အမျိုးသားခေါင်ဆောင်ကြီး သခင်မြ ၏ မိန့်ခွန်းများ
ကျွန်တော် အလယ်တန်း ကျောင်းသားဘဝ ကတည်းက အလွန်လေးစားအားကျခဲ့ရသော နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ကြီး နှစ်ဦးရှိပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံးမှာ အာဇာနည် အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီးများ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နဲ့ သခင်မြ ပါ။ တက္ကသိုလ်ရောက်တော့လည်း နိုင်ငံရေး စိတ်ဝင်စားသူ သူငယ်ချင်းများနဲ့ သခင်မြ ရဲ့ နိုင်ငံရေး အတွေးအခေါ် နှင့် သေနင်္ဂဗျုဟာ အထူးသဖြင့် မြေအောက်လှုပ်ရှားမှု အကြောင်းပြောကြ၊ တွေးကြသည်။ တနေ့ စာအုပ်ဆိုင်တဆိုင်မှ သခင်ချစ်မောင် ( ဝိဓူရ ) ရေးသော " အမျိုးသား အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး သခင်မြ " စာအုပ်ကိုရခဲ့ပါတယ်။ စာအုပ်က စာမျက်နှာ ၇၀၀ ကျော်လောက်ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော် ခေါင်းဆောင်ကြီး သခင်မြ အကြောင်းကို တဝကြီး ဖတ်ခွင့်ရပါတယ်။ ပြီးတော့ ခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့ မှတ်တမ်းဝင် ဓါတ်ပုံတွေကိုလည်း လေ့လာကြည့်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်နှစ်သက်တဲ့ စာပုဒ်တွေ မိန့်ခွန်းတွေကို မှတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ အခု ကျွန်တော်တို့ ခေတ်နဲ့ အချိန်နဲ့ အသုံးဝင်မယ့် မိန့်ခွန်းတွေကို ရေးသားတင်ပြလိုက်ပါတယ်။
အခုဆိုရင် စစ်အာဏာရှင်တွေက သူတို့ နိုင်ငံတကာမှာတရားဝင် ရပ်တည်နိုင်မယ် မမျှော်လင့်ချက်နဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ကိုမတရား၊ တဖက်သတ် ကျင်းပတော့မှာပါ။ စစ်အာဏာရှင်တွေက အသားတစက်မှ မရှိတဲ့ အရိုးနံ့လေး ပေးရုံရှိသေး အခွင့်အရေးသမားတွေက အသံကောင်းဟစ်ပြီး စစ်အာဏာရှင်တွေစိတ်တိုင်းကျလုပ်ထားတဲ့ လွှတ်တော်ထဲြေ့ပးဝင်ဖို့ကြိုးစားကြပါတယ်။ အဲဒီအခွင့်အရေး သမားတွေထဲမှာ အချို့တွေက အင်္ဂလိပ်လက်အောက် လွှတ်တော်ထဲဝင်ြ့ပီး ဝေဖန်ဆန်ကျင့်ရဲတဲ့ သခင်မြကို ခိုင်းနှိုင်းပြီး မတရားတဲ့ေ၇ွးကောင်ပွဲကို ကြိုဆိုကြပါတယ်။ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး သခင်မြ နဲ့ အခွင့်အရေးသမားတွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေဟာ မိုးနဲ့မြေ ကွားခြားပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်းကြီး သခင်မြ ရဲ့ ရဲရဲတောက်မိန့်ခွန်းနဲ့ သတ္တိတွေတွေကို တစွန်းတဆ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
အာဇာနည်တွေရဲ့ ရဲရင့်တဲ့ အတွေး၊ ပြဿနာတိုင်း၊ ကိစ္စတိုင်း အပေါ် ပြောင်ပြောင်မြောက်မြောင် ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့၊ ရင်ဆိုင်ရဲတဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို လေးစားအားကျနိုင်ပါစေ။ အထူးသဖြင့် ခေါင်းဆောင်ကောင်းအချင်းချင်း လေးလေးစားစား ညီညီညွတ်ညွတ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွတ်ခဲ့မှုကိုလည်းမှတ်သားအတုယူ ကျင့်သုံးနိုင်ပါစေ။
အာဇာနည်စိတ်ဆိုတာ အမှန်တရားအတွက် တုံးတိုက်တိုက်၊ ကျားကိုက်ကိုက် နောက်မဆုတ်စတမ်း ရင်ဆိုင်ရဲသောစိတ် ဖြစ်ပါတော့တယ်။
(၆. နိုဝင်ဘာလ. ၂၀၁၀)
" ကျွန်တော်တို့ သခင်တွေဟာ နိုင်ငံရေးဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲမှုကို မကြောက်တတ်ပါဘူး၊ ဒီအတွက် ရင်ဆိုင်ရန် အသင့်ပါပဲ။ တို့ဗမာအစည်းအရုံးကို နယ်ချဲ့အစိုးရက မတရား အသင်းကြေညာချင်သလား၊ ကြေညာချင်ရင် ကြေညာပါလို့ ကျွန်တော် စိန်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း လုပ်ရဲရင်လုပ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ သခင်တွေဟာ နယ်ချဲ့နဲ့ အရင်းရှင်မြေရှင်တွေကို အန္တာရာယ်ပေးခဲ့တာ၊ ပေးမှာအမှန်ပါ။ ”
( ၁၉၃၉၊ ဧပြီလ ၂၇ ရက်တွင် ဗြိတိသျှအစိုးရက တည်ထောင်ပေးထားသော မြန်မာနိုင်ငံတော် ဥပဒေပြုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် သာယာဝတီတောင်ပိုင်း၊ မဲဆန္ဒနယ်မှ ဥပဒေပြုလွှတ်တော်အမတ် သခင်မြ မှပြောဆိုခဲ့သော မိန့်ခွန်းမှ ကောက်နုတ်ချက်)
" ဆရာ့လို တိုင်းပြည်အတွက် ရာဇဝင်မော်ကွန်းတင်ရစ်အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်သူ ယခုခေတ်မှာ အလွန်ရှားပါးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆရာ့အနေနဲ့ ဘာမှ ကြောက်ရွံ့စရာ မလိုပါ။ ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာဖြင့် လာမည့်ဘေးကို ပြေးတွေ့ပါ။ ဗြိတိသျှအစိုးရက ဗမာပြည်သူတွေအပေါ် မတော်မတရား ကြံစည်ဖိနှိပ်မှုများကို မခံမရပ်နိုင်၍ လက်နက်စွဲကိုင် တော်လှန်ရကြောင်း နောင်လာနောက်သား ဗမာများ ဂုဏ်ယူဝင့် ကြွားနိုင်အောင် ရာဇဝင်တွင်အောင် ရင်ဆိုင်ပြောဆိုပါ။ ကျွန်တော်တို့သာ ဆရာ့နေရာမှာရှိရင် သေဒဏ်တကြိမ်သာမဟုတ် ဆယ်ကြိမ် ဆယ်ကြိုးအကျခံပါမယ်။ "
(လယ်သမားတော်လှန်ရေး ခေါင်းဆောင်ကြီး ဆရာစံ အား သာယာဝတီထောင်ထဲတွင် ရှေ့နေကြီး သခင်မြ မှပြောသောစကား)
“ ဥက္ကဋ္ဌကြီးခင်ဗျာ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပါဝင်ထားတဲ့ တို့ဗမာအစည်းအရုံးကြီး ကို ကုလား- ဗမာ အဓိကရိုဏ်း စုံစမ်းရေးကော်မတီက အလွန်နစ်နာစွာ စော်ကားပြု ရေးသားထားပါတယ်။ တို့ဗမာ အစည်းအရုံးကြီးကို ကုလား- ဗမာ အဓိကရိုဏ်းနဲ့ တွဲဖက်ဖော်ပြထားတာဟာ အလွန်မဆီလျော်၊ မအပ်စပ်တဲ့ ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ တို့ဗမာ အစည်းအရုံးရဲ့ စည်းမျဉ်းမှာ လူမျိုးရေးအရ ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ သဘောတရားကို ဘယ်တုန်းကမှ မချမှတ်ခဲ့ပါ။ ဒီလိုဝါဒမျိုးကို အုပ်စိုးခံ ပြည်သူတွေအပေါ်မှာ သွေးခွဲလေ့ရှိတဲ့ အစိုးရများကသာ ချမှတ်လေ့ရှိပါတယ်။ “
ကျွန်တော်တို့ တို့ဗမာအစည်းအရုံးရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ အိန္ဒိယအမျိုးသားများဟာ အမြဲမပြတ် လက်တွဲရပ်တည် လုပ်ဆောင်ခဲ့တာ အားလုံးအသိပါ။ အိန္ဒိယအလုပ်သမား၊ လယ်သမား၊ ကျောင်းသားများသာ တို့ဗမာအစည်းအရုံးတွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီး အိန္ဒိယဓနရှင်များ မပါဝင်ပါ။ ဒါကြောင့်လည်း တို့ဗမာအစည်းအရုံးက ကျဥင်္းမြောင်းတဲ့ လူမျိုးရေးသွေးခွဲမှု လုပ်ငန်းမျိုးမှာ ဘယ်တော့မှ မပါဝင်ခဲ့ပါ။ သို့ပါလျှက် အဓိကရိုဏ်း စုံစမ်းရေးကော်မတီက တို့ဗမာသခင်တွေကို ရာဇဝတ်ကောင်များဖြစ်အောင် စွပ်စွဲထားပါတယ်။ အစီရင်ခံစာရဲ့ တနေရာမှာ တို့ဗမာအစည်းအရုံးဟာ ကွန်မြူနစ်ဆန်ကြောင်း ကြေငြာထားပြီးတနေရာမှာတော့ သခင်များကိုယ်တိုင် အဓိကရိုဏ်းမှာ ပါတယ်လို့စွပ်စွဲထားပါတယ်။ ဘယ်ကလောက် အမြီးအမောက်မတည့်တဲ့ စွပ်စွဲချက်ပါလဲလို့ မေးပါရစေ။ ကွန်မြူနစ်ဆိုတာ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု ဝါဒအားလုံးကို ပယ်ဖျက်တဲ့ နိုင်ငံတကာ စည်းလုံးညီညွတ်ရေးဝါဒဖြစ်တယ်။ အဖွဲ့အစည်းတရပ်ကို ကွန်မြူနစ်ဆန်တယ်လို့ စွပ်စွဲပြီးရင် ဒီအဖွဲ့အစည်းဟာ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး လူမျိုးရေးခွဲခြားရေးဝါဒကို ဆုပ်ကိုင်ထားတယ်လို့ စွပ်စွဲနိုင်ရပါသလဲ။
“ ဥက္ကဋ္ဌကြီးခင်ဗျာ…. အစိုးရက ရွှေတိဂုံစေတီ ကုန်းတော်ပေါ်တက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ တို့ဗမာအစည်းအရုံး ခေတ္တဋ္ဌာနချုပ်ကို စစ်တပ်၊ ပုလိပ်တပ်ဖွဲ့များနှင့် ဝိုင်းဝန်းဖျက်ဆီးခဲ့တယ်။ အဲဒီတုန်းက ရန်ကုန်ပုလိပ်မင်းကြီးက ကြေညာချက်တစောင် ထုန်ပြန်ရာမှာ တို့ဗမာအစည်ွးှရုံး ဟာ အစိုးရကိုလက်နက်နဲ့ အကြမ်းဖက်၊ ဖြိုဖျက်ရန်လုပ်ကြံလေတဲ့အတွက် ယခုလို ရှာဖွေဖမ်းဆီးရပါတယ်တဲ့။ တကယ့်လက်တွေ့မှာတော့ ဗြိတိသျှနယ်ချဲ့စနစ်ကသာ တို့ဗမာအစည်းအရုံးကြီးကို အကြမ်းမဖက်ပေမယ့် ဥပဒေနှင့် အကြမ်းဖက်နေတာ ထင်ရှားပါပြီ။“
“ ဟောဒီမှာကြည့်ပါ၊ ဒီကော်မတီအစီရင်ခံစာ စာအုပ်ကြီးဟာ နယ်ချဲ့စနစ်ရဲ့ မတရားလီဆယ် လုပ်ကြံမှုကြီးပါပဲ။ ဒီလုပ်ကြံမှုကြီးဟာ ကျွန်တော်တို့ တို့ဗမာအစည်းအရုံးကြီးကို မတရားအသင်း ကြေညာရန် နိုင်ငံရေးအရ ဖိနှပ်ချေမှုန်းရန် စတင်ကြံစည်ခြင်းပါဘဲ။ နယ်ချဲ့စနစ်က ကျွန်တော်တို့သခင်တွေကို ဖိနှပ်ချေမှုန်းလိုပါသလား။ ဖိနှိပ်ပါစေ။ ကျွန်တော်တို့သခင်တွေက နယ်ချဲ့တို့ထံက တခုခုတောင်ဆိုချင်ပါတယ်။ ဒီစုံစမ်းရေးကော်မတီ အစီရင်ခံစာမျိုးနဲ့ လီဆယ်လုပ်ကြံပြီး တိုက်ပွဲမခင်းဘဲနဲ့ သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက် ရဲရဲဖြောင့်ဖြောင့်ကြီး တိုက်ပွဲဝင်ကြရအောင်။ “
" ကျွန်တော်တို့ သခင်တွေဟာ နိုင်ငံရေးဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲမှုကို မကြောက်တတ်ပါဘူး၊ ဒီအတွက် ရင်ဆိုင်ရန် အသင့်ပါပဲ။ တို့ဗမာအစည်းအရုံးကို နယ်ချဲ့အစိုးရက မတရား အသင်းကြေညာချင်သလား၊ ကြေညာချင်ရင် ကြေညာပါလို့ ကျွန်တော် စိန်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း လုပ်ရဲရင်လုပ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ သခင်တွေဟာ နယ်ချဲ့နဲ့ အရင်းရှင်မြေရှင်တွေကို အန္တာရာယ်ပေးခဲ့တာ၊ ပေးမှာအမှန်ပါ။ သို့သော်လည်း စုံစမ်းရေးကော်မတီက ရေးသားစွပ်စွဲထားသလို ဆင်းရဲသားကုလား အမျိုးသားများကိုတော့ အန္တရာယ်မပြုခဲ့တာ အမှန်ပါ။ “
မှတ်ချက်….၁၉၄၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ( ၉ ) ရက်နေ့တွင် ဗြိတိသျှအစိုးရသည် တို့ဗမာအစည်းရုံးကို မတရားသင်း ကြေညာခဲ့သည်။
ဘုရင်ခံ “ မနေ့ညက စင်ကာပူခံတပ်ကြီး ကျဆုံးသွားပြီ၊ ဗြိတိသျှတပ်တွေအားလုံး လက်နက်ချလိုက်ရပြီလို့ လန်ဒန်ရေဒီယိုက ကြေညာသံကြားရတော့ ကျွန်ုပ်စိတ်မချမ်းမသာ ဖြစ်ရတယ်ဗျာ“
သခင်မြ “ လေးစားရပါသော ဘုရင်ခံမင်းကြီး စိတ်ဒုက္ခခံစား ရတာကို ကျွန်ုပ်တို့ များစွာ ကိုယ်ချင်းစာနာနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အထွဋ်အမြတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ သီပေါဘုရင်မင်းမြတ် ပါတော်မူခဲ့စဉ်ကတည်း၊ အလားတူပင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘိုးဘွားဆွေမျိုး ညာတကာ တိုင်းသူပြည်သားများ ယူကျုံးမရ၊ စိတ်ဒုက္ခကြီးစွာ ရောက်ခဲ့ရပါတယ်။ ”
(သခင်မြ က ဘုရင်ခံ ဆာဒေါ်စမစ် ကိုအချက်ကျကျ စကားဖြင့်ထိုးနှက်ချက် )
“ တိုင်းပြုပြည်ပြုလွှတ်တော် သဘာပတိအဖြစ် တင်မြှောက်ဖို့ ကျွန်တော်က ဘဏာရေးဝန်ကြီး သခင်မြကို အဆိုတင်သွင်းပါတယ်။ ဘဏာရေးဝန်ကြီး သခင်မြ အကြောင်းကို ကျွန်တော် အထူးပြောစရာ မလိုပါဘူး။ သူဟာ အရင်တုန်းကလည်း သည်ဥပဒေပြုလွှတ်တော်မှာ မင်းတိုင်ပင် အမတ်ပြုလုပ်လာခဲ့ပါတယ်။ ရှေးကလည်း ဗမာပြည်ရဲ့ တိုင်းကျိုးပြည်ကျိုးကို ၁၉၂၀ ပြည့်နှစ်၊ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ သပိတ်က စပြီးတော့ ရွပ်ရွပ်ချွံချွံ တောင်ရွတ်လာခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတဦးဖြစ်ပါတယ်။ သည်တော့ကာ သခင်မြကို ကျွန်တော်က တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော်ယာယီသဘာပတိအဖြစ် တင်မြှောက်ဖို့ အဆိုတင်သွင်းပါတယ်။ “
( ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၁ ရက်၊ အင်္ဂါနေ့ တွင်ကျင်းပခဲ့သော တိုင်းပြုပြည်ပြုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် လမ်းမတော်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်မှ အမတ်ဦးအောင်ဆန်းက ပထမဆုံး လွှတ်တော်အခမ်းအနားတွင် လွှတ်တော်သဘာပတိ အဖြစ် သာယာဝတီတောင်ပိုင်း မဲဆန္ဒနယ်မှ အမတ်သခင်မြအား တင်မြှောက်ရန် အဆိုပြုခဲ့စဉ်က ပြောခဲ့သောစကား)
မှတ်ချက်…ဦးအောင်ဆန်း အဆိုကို ဟင်္သာတကျေးလက် ကရင်တိုင်းရင်းသား အမတ်မန်းဘခိုင်က ထောက်ခံခဲ့လေသည်။
“ ဥက္ကဋ္ဌကြီးခင်ဗျာ၊ ဗြိတိသျှအစိုးရသည် ဗမာပြည်အား လုံးဝလွတ်လပ်သော နိုင်ငံတနိုင်ငံအဖြစ် လိုက်လျောကြေညာခြင်းမပြုသမျှ ကျွန်တော်တို့သည် ဗြိတိသျှအစိုးရ၏ စစ်အောင်မြင်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွတ်ခြင်း မပြုသင့်ပါ။
ကျွန်တော်တို့ဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အပြောမှာ ရှေ့နောက်ညီညွတ်သူတွေအဖြစ်နဲ့ ရာဇဝင်မှာ မှတ်တမ်းတင်ခံလိုတယ်ဆိုရင် လွတ်လပ်ရေးဆုံးဖြတ်ချက်ကို အကောင်အထည် ဖော်လိုသူတွေဖြစ်ရင် ဒီဥပဒေကြမ်းကို သဘောမတူသင့်ပါ။ “
(၁၉၄၀ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁) ရက်နေ့တွင် ဗမာပြည် အရံစစ်တပ်များ ဖွဲ့စည်းရေး ဥပဒေကြမ်းကို ဥပဒေပြုလွှတ်တော်၌ ဗြိတိသျှနယ်ချဲ့အစိုးရဘုရင်ခံ၏ အတိုင်ပင်ခံ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး၊ မစ္စတာ ဆာဘူသ်ဂရေဗလီက တင်သွင်းခဲ့ရာ ဥပဒေပြုလွှတ်တော်အမတ် သခင်မြ ကန့်ကွက်ပြောစကား)
ဘလော့ခ်များမှ သခင်မြ အကြောင်း
“သခင်မြ အတ္ထုပတ္တိ” http://parami2009.blogspot.com/2010/08/blog-post_25.html
“သခင်မြ၏ ဖြတ်ထိုးဉာဏ်” http://usattsuu.blogspot.com/2010/09/blog-post_1054.html
“သခင်မြ (သို့မဟုတ်) ဗမာ့မြေအောက်တော်လှန်ရေးဖခင်” http://pyustate.com/2008/07/blog-post_11.html
ဘလော့ခ်ဂါ အလင်းဆက် ရှာဖွေ၊ တွေးဆ၊ ရေးသား၊ တင်ပြသည်။
(၇. နီုဝင်ဘာလ. ၂၀၁၀)
Posted by အလင်းဆက် at 6:57 PM 1 comments
ဖက်ဆစ်လက်သစ်ဝါဒ အလိုမရှိ !!!
ကုလသမဂ္ဂ မြန်မာပြည် စုံစမ်းရေးအဆို ဂျာမနီ တရုတ်ဘက်လိုက်ပြီး ဆန့်ကျင်
မြန်မာ့အရေးနှင့် ပတ်သတ်ပြီး မိမိနိုင်ငံ အကျိဲုးစီးပွား တခုသာကြည့်ပြီး သန်း ၆၀ နိးပါးရှိသော စစ်အာဏာရှင်လက်အောက် မြန်မာပြည်သူများ၏ ဒုက္ခအပေါင်းကို လျစ်လျုရှု ပြီးစစ်အာဏာရှင်အား အားပေးနေသော တရုတ်နှင့် ဂျာမဏီ အပါအဝင် စစ်အာဏာရှင်၏ မတရားသော ရွေးကောက်ပွဲ အားထောက်ခံနေသော နိုင်ငံများကို အထင်သေးရှုပ်ချပါတယ်။
ဘလော့ခ်ဂါ အလင်းဆက် (၆. နိုဝင်ဘာလ. ၂၀၁၀)
“တိုင်းသူ ပြည်သားတွေရဲ့ ဆန္ဒအရမဟုတ်ဘဲ တိုင်းသူပြည်သားတွေနဲ့ ကင်းကွာပြီး မင်းစိတ်ပေါက်နေတဲ့ အရာရှိတွေ ခြယ်လှယ်တဲ့ စနစ်ဆိုးမျိုးရှိနေရင် အများပြည်သူတို့ရဲ့ဆန္ဒနဲ့ လုပ်ကိုင်ရတဲ့ ဒီမိုကရေစီဝါဒ ခေတ်မစားနိုင်တဲ့ ဖက်ဆစ်ဝါဒ ဆင်တူရိုးမှားတွေ ပေါ်လာနိုင်တယ်”။
Posted by အလင်းဆက် at 9:30 PM
Posted by အလင်းဆက် at 9:54 PM0comments
သခင်အောင်ဆန်း ပြောပြတဲ့ ချင်းအမျိုးသားခေါင်းဆောင် သခင်ဝမ်းသူမောင် အကြောင်း..
၁၉၄၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ (၁) ရက်နေ့တွင် ဟင်္သာတ ခရိုင်၊ တို့ဗမာအစည်းအရုံး ညီလာခံကို ဇလွန်မြို့၌ စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပလေသည်။ ဋ္ဌာနချုပ် တို့ဗမာအစည်းအရုံးခေါင်းဆောင် သခင်အောင်ဆန်းသည် တရားဟောစင်မြင့်ပေါ်သို့ တက်လာလေသည်။ သခင်အောင်ဆန်းက ပမာဏစကားပြောကြားနေစဉ် တရားဟောစဉ်မြင့်ယန်းကျင်၌ ဝန်းရံနေသော ပုလိပ်စုံထောက်များထဲမှ စုံထောက်တဦးက၊ တရားဟောစင်မြင့်မှ သခင်အောင်ဆန်းထံ စာတစောင် ပေးလိုက်သည်။
သခင်အောင်ဆန်းက စာကိုဖတ်ပြီး ပြုံးလိုက်သည်။ စာက ဟင်္သာတခရိုင် ရာဇဝတ်ဝန် မစ္စတာ ဇေဗီးယားထံမှ ပေးပို့လိုက်သောစာဖြစ်သည်။ သခင်အောင်ဆန်းသည် စာကိုဖတ်ပြီး ပြည်သူ့လူထုထံ မျက်နှာမူလျှက် ပြောလိုက်သည်။
သခင်အောင်ဆန်း။ ။" ဟောဒီမှာ ဟသာင်္တ ရာဇဝတ်ဝန် မစ္စတာ ဇေဗီးယားထံက ဖိတ်စာတစောင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သူ့စာမှာ ဖော်ပြထားတာကတော့ ချင်းတောင်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကိစ္စကို ယခုဟောပြောရာမှာ ထည့်သွင်းဟောပြောခြင်း မပြုရဘူးလို့ ပိတ်ပင်တားမြစ်ထားတာပါပဲ။ အတော်ပဲဗျာ။ အစကတော့ ဒီချင်းတောင်ကိစ္စပြောဖို့ ကျုပ်မေ့နေတယ်။ ခု ဟင်္သာတရာဇဝတ်ဝန်က သတိပေးမှပဲ ကျုပ်သတိရတော့တယ်၊ ကဲ ပရိသတ်ကြီးကို မေးရအုံးမယ်၊ ချင်းတောင်ကိစ္စ ကြားချင်ကြသလား။
" ပရိသတ်ကြီး။ ။ " ကြားချင်ပါတယ် "
သခင်အောင်ဆန်း။ ။ " ကဲ......ကြားချင်ကြတယ်ဆိုရင်တော့.. ပြောပြချင်နေတာနဲ့ အတော်ပါဘဲ။ ချင်းတောင်ကိစ္စကတော့ ဒီလိုပါ။ ချင်းတောင်မှာ ဗြိတိသျှအစိုးရက ပြည်သူလူထုကို ရက်ရက်စက်စက် နှိပ်ကွပ်နေတယ်။ ချင်းအမျိုးသား ခေါင်းတောင်၊ တို့ဗမာအစည်းအရုံးက သခင်ဝမ်းသူမောင်ကို ဘယ်လိုနှိပ်စက်တယ် ထင်ကြသလဲ။ သခင်ဝမ်းသူမောင်ကို ကိုယ်မှာကြိုးကွင်းစွပ်ပြီး ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင်လာတယ်။ နောက်တော့ ချည်ထားတဲ့ကြိုးကို ရှေ့ကနေ မြင်းနဲ့ဆွဲသွားပြီး သခင်ခေါင်းဆောင်ကို မြေပြင်မှာ ဒရွတ်တိုက်ဆွဲသွားတယ်။ ချင်းအမျိုးသားတွေက ဗြိတိသျှအစိုးရက မဆန့်ကျင်ရဲအောင် လက်တွေ့ရက်စက်ပြလိုက်တာပဲ။ ဗြိတိသျှအစိုးရဟာ ချင်းတောင်မှာ ပြည်သူတွေအပေါ် အဲဒီလောက် ဆိုးဆိုးရွားရွား ဝိဒူရလက်သစ် ဇတ်ခင်းခဲ့တယ်။
ကဲ........အဲဒါ ဗြိတိသျှနယ်ချဲ့ အစိုးရရဲ့ ဒီကနေ့လုပ်နေပုံပါဘဲ။ "
သခင်အောင်ဆန်း ဟောပြောတာကိုကြားပြီးသောအခါ နားဆင်ရသော ပရိသတ်ကြီးမှာ ဒေါသမီးဟုန်းဟုန်း တောက်ကြသည်။ အံတကြိတ်ကြိတ်ခံစားကြရသည်။
ဟင်္သာတရာဇဝတ်ဝန် ဇေဗီးယားက သခင်အောင်ဆန်းကို ချင်းတောင်ကိစ္စ ဟောပြောမှုဖြင့် ချက်ချင်းဖမ်းဆီးရန် ဝရမ်းထုတ်ခဲ့သည်။
အာဇာနည် အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ မတရားသော အမိန့်အာဏာ ကိုဖီဆန်ရဲသော သတ္တိနှင့် အဖိနှိပ်ခံ ပြည်သူလူထုဘက်က ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရပ်တည်ပြောပေးသော စိတ်ဓါတ်ကား လေးစားအားကျဖွယ်ပင် ဖြစ်တော့သည်။
၃. နိုဝင်ဘာလ. ၂၀၁၀
ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ မတရားသော အမိန့်အာဏာ ကိုဖီဆန်ရဲတဲ့ သတ္တိကို ဖတ်မိရင်း ... ပြည်တွင်းမှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ပြတ်ပြတ်သားသား ရွေးကောက်ပွဲ သပိတ်မှောက်ပြီး မဲမပေးရေး လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ပြည်တွင်းက စစ်အစိုးရရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီ တော်တော်များများက လေလှိုင်းသံတွေထဲက ဆူညံဆူညံနဲ့ ပြောဆိုဝေဖန်သံတွေ ကြားလိုက်မိပေမယ့်....
မတရားတဲ့ လုပ်ရပ်တွေနဲ့ ကြံ့ဖွတ်ပါတီရဲ့ နိုင်ငံပိုင် ဘဏ္ဍာငွေတွေနဲ့ မတရားမဲဆွယ်မှုတွေ .. အဓမ္မလုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုတော့ ဝေဖန်သံတွေ ကြားတစ်ချက် မကြားတစ်ချက်နဲ့ နှာစေးနေကြပါတယ်. .. ဗိုလ်ချုပ်ပြောသလို ချင်းတောင်ကိစ္စ ကြားချင်သလားဟေ့လို့ ပရိသာတ် ဖြစ်တဲ့ ပြည်သူလူထုကို ပြောရဲသလို.. အမတ်ဖြစ်ရင် ဘာလုပ်ပေးမယ် ညာလုပ်ပေးမယ်.. ဆိုတဲ့ အလံတု ဒေါင်းတု ခမောက်တုပါတီတွေများ ကြံ့ဖွတ်ပါတီရဲ့ မတရားလုပ်ဆောင်ချက်တွေ ဥပဒေမဲ့လုပ်ရပ်တွေကို ပရိသာတ်ကြီးရေ ကြားချင်သလားဟေ့လို့ ပြောဆိုတဲ့ အသံများ ရှိခဲ့မယ် ဆိုရင်တော့ စစ်အာဏာရှင်ရဲ့ မတရားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဟာ အခြေအနေတစ်ခုသို့ ပြောင်းလဲကောင်း ပြောင်းလဲနိုင်ပါရဲ့လို့ တွေးတောမိပါတော့တယ်။
Posted by အလင်းဆက် at 2:31 AM0comments
နိုင်ငံရေး နှင့် တဘောင်
မြန်မာပြည်ကနာမည်ကျော် ဝေဒပညာရှင် တစ်ဦး ပေးပို့လာတဲ့ တဘောင်လေးတစ်ခုကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်...။
ကိုဒီမိုရေ ကျွန်တော် မြန်မာပြည် အနယ်နယ်အရပ်ရပ်နဲ့ မဇ္ဈိမဒေသတွေမှာ ဘုရားတည်.. ကျောင်းဆောက်နေတဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးကြီး တစ်ဦးပေးပို့လာတဲ့ တဘောင် စာသားလေးကို ပေးပို့လာပါတယ်..။ အားလုံးမြင်ဘူး ကြားဘူးကြမှာ မဟုတ်ပေမယ့် ဒီတဘောင်ကို ဆက်ပြီးဖြန့်ပေးပါလို့ သူကကျွန်တော့်ကို တိုက်တွန်းသွားပါတယ်.... ။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ လာမယ့်ရက်ပိုင်း လပိုင်းအတွင်းမှာ အကြီးအကျယ် အပြောင်းအလဲတွေနဲ့ ကြုံတော့မယ်လို့ အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကြီးက ပြောပြတယ်လေ.. အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်သူ တစ်ယောက်ရဲ့ နောက်ဆုံး အချိန်လို့ ပြောလို့ ရတဲ့ အချိန်ကို ရောက်နေပြီတဲ့။ နောက်အခုလက်ရှိ အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်သူက တဘောင်တွေ ဘာတွေ ထွက်လာရင် ကြောက်လည်းကြောက် ယုံလည်းယုံတယ်တဲ့.. ကိုဒီမိုရဲ့ သတင်းဘလော့(ဂ်)နဲ့ မဆိုင်ပေမယ့် ဒီတဘောင်ကို အများသိစေဘို့ ဖော်ပြပေးပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်..။ တဘောင်ကတော့..
အထက်ပါ တဘောင်ကို ပေးတဲ့ ဆရာက အကြမ်းဖျဉ်း ပြောပြသွားတာတော့ .. ယခုလက်ရှိ မင်းလုပ်အုပ်ချုပ်သူဟာ အခုလို ၁၉၉၂ ခုနှစ် မှာအာဏာကို ရရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ပေါင်းရင် ၁+၉+၉+၂=၂၁​= ၃ဂဏန်းရရှိပြီး ယခုနှစ် ၂၀၁၀ဟာလည်း ၃ဂဏန်း ရရှိတဲ့ နှစ်ပါတဲ့..။ ဒါကြောင့် သူဟာလက်ရှိအာဏာကို ဆက်ပြီး ဆွဲကိုင် လိုတာကြောင့် ဒီဂဏန်းကို အတင်းအကြပ် ရအောင်လုပ်ယူနေတာပါတဲ့..။ အခြေအနေ ကံအကြောင်းကြောင့် ကိုယ်လာတဲ့ အရပ်ကိုယ်မသိပဲ အကုသိုလ် ကံတွေ ဆက်တိုက်ကျူးလွန် နေတဲ့ အတွက် သူလက်ရှိထိုင်နေတဲ့ နေရာကိုလည်း အပိုင်လို့ထင်နေခဲ့တာပါတဲ့..။ သူ့ရဲ့ကံဟာလည်း ဒီနှစ်နောက်ဆုံးပါတဲ့..
ဒါကတော့ အကြမ်းဖျဉ်းပါ.. တခြားထက်ပြီး ပေးပို့လာတဲ့ အထဲမှာ ပါတဲ့ ကျွန်တော်တို့ လိုက်မမှီ မတွေးခေါ်နိုင်တဲ့ မမြင်ရတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကိုတော့ မဖော်ပြတော့ပါဘူး..။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမယ့်ရက်ဟာလည်း မြန်မာပြက္ခဒိန်အရ တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း (၁)ရက်နေ့ပါပဲ..။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လောကကြီးမှာ ကိုယ်မမြင် မသိတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို မရှိနိုင်ဘူး မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ မပြောဆိုနိုင်တဲ့ အတွက် ယခုလို အရေးကြီးတဲ့ အချိန်မှာ တစ်ထောင့်တစ်နေရာက ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်..။
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မသိတဲ့ အကြောင်းအရာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အောက်မှာ တေးအေးရိပ်ရဲ့ တဘောင်ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ရှင်းပြထားတဲ့ ၂၀၀၈ခုနှစ်က ပိုစ့်တစ်ခုကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
တဘောင်ဟူသည် လက်ရှိပစ္စုပ္ပာန်မှ အနာဂတ်အရေးအတွက် မျှော်တွေးပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ အရူးစကား၊ သဘင်သည်စကား များကို တဘောင်ဟု မှတ်ယူကြသည်။ သီပေါမင်း ထီးနန်း ဆက်ခံရမည့်အရေးကို အရူးမ တစ်ယောက်မှ “ရွှေမိုးရွာလို့ မယ်မအေး၊ ငွေမိုးရွာလို့ မယ်မအေး၊ ပထမပြန်ရှင်လိန်ထွက်၊ နန်းတက်မှအေး“ ဟူ သီဆိုခဲ့သည်ကို ပညာရှိများက သီပေါမင်း ထီးနန်းစံရမည် ဟု တဘောင်ဖတ်ခဲ့ကြသည်။ တဘောင်စကားအား ယခုခေတ်တွင် အရူးများ၊ ဇာတ်သဘင်များ၊ လူရွှင်တော်များ ထံမှ ကောက်ယူနိုင်ပေသည်။
လွန်ခဲ့သော ၁ နှစ်ကျော် ၂ နှစ်ခန့် က ရန်ကုန်မြို့ တွင် တဘောင်တစ်ခု ပေါ်ထွက်ခဲ့သေးသည်။ “ရန်ကုန် အုတ်ပုံ၊ မန္တလေး ပြာပုံ “ ဟူသော တဘောင်စကား ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ၄င်းအချိန်ကာလအတွင်း မြေငလျင်တုန်လှုပ်မှုများ အရှေ့ တောင် အာရှ တွင် ဖြစ်ပွားလျက်ရှိကြသည်။ ထိုတဘောင် ၏ ဆိုလိုရင်းအား အမျိုးမျိုး ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။
အချို့ လူများက ရန်ကုန်မြို့ ကြီး မြို့ ပျက်စီးကာ အုတ်ပုံမျှပင်ကျန်ခဲ့မည်။ မန္တလေးမြို့ ကြီးကား မီးလောင်မှုကြောင့် ပြာပုံအတိ ဖြစ်မည်ဟု တဘောင် ဖတ်ကြသည်။ သို့ သော်လည်း အခြားဘက်မှ စဉ်းစားမည်ဆိုပါက ရန်ကုန်မြို့ တွင် ယခင်ကထက် ပိုမိုပြီး လူအများ အုတ်အုတ်ကျက်ကျက်၊ စုရုံးစုရုံး၊ သတင်းစကားများပိုမို ဖြစ်မည်။ မန္တလေးမြို့ တွင် လူအများ၊ ရဟန်းသံဃာတော်များ ပျာယာခတ်မည်။ ပြာပုံအား ပြောင်းပြန်ယူပါက ပြုံပါ- တစ်ပြုံလုံးပါမည် ။ ထို့ ကြောင့် အကြောင်းအရာတစ်ခုခုဖြစ်ပွားမည် ဆိုပါက ရဟန်း၊ ရှင် ၊ လူအများ စုစည်းကာ တစ်ပြုံလုံးပါလာမည် စသဖြင့် တဘောင် ကောက်ယူနိုင်ပေသည်။
အပြည့်အစုံ ဖတ်ချင်ရင်တော့ http://www.ainmat.com/index.php?/archives/561-unknown.html
အကိုဒီမိုဝေယံ ဘလော့ခ်မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
Posted by အလင်းဆက် at 7:32 PM0comments
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ပြောတဲ့ ‘ နိုင်ငံရေး နှင့် လူယုတ်မာ ‘
၁၉၄၆ ခုနှစ် တခုသောညနေတွင် ရန်ကုန်မြို့၊ အိစ်တင်းကလပ်ခေါ် ဂုဏ်သရေရှိ အနောက်တိုင်းသားတို့၏ အဖွဲ့အစည်းတခုက ရန်ကုန်မြို့ရောက် အိန္ဒိယဘုရင်ခံချုပ် လော့ခ် လူဝီမောင့်ဘက်တန် ( Lord Louis Mountbatten) အား ဂုဏ်ပြုသော ညစာ စားပွဲကြီးတွင်ဖြစ်သည်။ ဘုရင်ခံချုပ် မောင့်ဘတ်တန် ပြောသွားသော မိန့်ခွန်းထဲတွင်
( Politics is the refuge of scoundrels )
" နိုင်ငံရေးလောကဆိုတာ လူယုတ်မာတို့၏ ခိုလှုံရာဒေသ ဖြစ်တယ်" ဟူသော စာကြောင်းပါခဲ့သည်။
ဘုရင်ခံချုပ်က ထိုသို့မိမိဂုဏ်ပုဒ်နှင့် မလိုက်လျော့သည့် စကားတွေပြောပြီး ထိုင်ချလိုက်တော့ နယ်ချဲ့အလိုတော်ရိ မင်းပရိသတ်တို့က လက်ခုပ်သံတွေ တဖြောင်းဖြောင်းနှင့် သြဘာပေးကြလေ၏။ သို့သော်....
လက်ခုပ်သံများ ကြားရ၍ မဆုံးမီမှာပင် ချောင်ကျသောနေရာမှာထိုင်နေသည့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း က ရုတ်တရတ် နေရာမှတရပ် နေရာမှထရပ်လိုက်သည်။ ဗိုလ်ချုပ်သည် စောစောက ဘုရင်ခံချုပ်စကားပြောခဲ့သော နေရာသို့ ခပ်သုတ်သုတ်ကလေး လျှောက်လာသည်။
ပြီးတော့ အောက်ပါ အတိုင်း အစီအစဉ်တွင် မပါဘဲ မိန့်ခွန်းတရပ်ကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ပြောချလေတော့သည်။
"ဂုဏ်သရေရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့ခင်ဗျား၊ အစီအစဉ်ထဲမှာ မပါဝင်တဲ့ လူတစ်ယောက်က ယခုလိုထပြီး ပြောလိုက်တော့ ခင်ဗျားတို့ထုံးစံအရ အလွန်ရိုင်းပျတယ်လို့ ထင်ကြမှာဘဲ။ ရိုင်းတယ်လို့ ထင်ရုံမကဘဲ လဲလို့ဘဲသေသေ၊ ကျုပ်ကတော့ဖြင့် ပြောစရာရှိတဲ့ စကားကိုပြောရမှာဘဲ။ ကျုပ်ပြောမှာကလည်း တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ဂုဏ်ပြုအပ်တဲ့ ဧည့်သည်တော်ကြီးရဲ့ သနားစရာကောင်းလှတဲ့ အဘိဓမ္မာကို ဝေဖန်ပြမယ့် အချက်ဖြစ်ပါတယ်။"
" နိုင်ငံရေးလောကဆိုတာ လူယုတ်မာတွေ ခိုကိုးရာဒေသဖြစ်တယ်လို့ ဘုရင်ခံချုပ်က ပြောသွားပါတယ်။ ဒါဟာ ဥရောပနိုင်ငံများမှာတော့ မှန်ကောင်းမှန်ပါလိမ့်မယ်။ ကျုပ်တို့ အရှေ့နိုင်ငံများ အယူအဆကတော့ ဘုရင်ခံချုပ်ကြီးနဲ့ ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီး ဆန့်ကျင်နေပါတယ်။ ကျုပ်တို့ဆီမှာ နိုင်ငံရေးဆိုတာ ပရဟိတလုပ်ငန်း၊ လောကတ္တစရိယ ကျင့်ကြံ အားထုတ်တဲ့ လုပ်ငန်း၊ ဒါဟာ ဒွိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေ မလုပ်နိုင်တဲ့ တိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ဘုရားလောင်းများသာ လုပ်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တယ်။
"အဲဒီလို အလွန်မွန်မြတ်တဲ့အထဲမှာ တခါတရံ လူယုတ်မာတွေ ပါလာကောင်းပါလာပါမယ်။ အဲဒါကြောင့် နိုင်ငံရေးအလုပ်ဟာ မကောင်းဘူးလို့ ဆိုရတော့မှာလား။ ဥပမာတခု ပြောပါရစေ။ ဒီအဆောက်အဦးကြီးဟာ (အိုရီယင့်ကလပ် ကိုဆိုလိုသည်) လူအများစုဝေးဖို့ ဆောက်လုပ်ထားတယ်၊ အစောင့်အကြပ်ကင်းမဲ့ချိန်မှာ တခါတရံ ခွေးတွေ တက်အိပ်နေကြတယ်ဆိုပါစို့။ အဲဒီလို ခွေးတွေတက်အိပ်နေတာကိုကြည့်ပြီး ဒီအဆောက်အဦးကြီးကို ခွေးတွေအိပ်ဖို့ဆောက်ထားဆိုရင် မှန်ပါ့မလား။ မမှန်ပါဘူး။"
" အဲဒါကြောင့် နိုင်ငံရေးဟာလည်း ဒီလိုပါဘဲ။ အလွန်မြင့်မြတ်ပါတယ်။ ဒီအဆောက်အဦးကြီးပေါ်မှာ ခွေးတွေ တက်အိပ်နေသလို လူယုတ်မာတွေလည်း အလစ်မှာ နိုင်ငံရေးလောကထဲ ဝင်လာတတ်ပါတယ်။ အဲဒီလို ဝင်လာတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရေးသမားစစ်စစ်တွေက ဒီလူယုတ်မာတွေကို မျက်ခြေမပြတ် ဟန့်တား ဝိုင်းပယ်နိုင်သည်နှင့်အမျှ နိုင်ငံရေးလောကြီးဟာ သန့်ရှင်းစင်ကြယ် မွန်ုမြတ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါဘဲ ကျုပ်ပြောချင်တာ။"
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ဤသိူ့ပြောချလိုက်ပြီး သူ့နေရာသူ ခပ်တည်တည်ဖြင့် ပြန်လာကာထိုင်နေလေသည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ပြောဆိုပြီးသွားသည်နှင့် အိန္ဒိယဘုရင်ခံချုပ် လော့ခ်လူဝီ မောင့်ဘတ်တန်သည် နေရာမှထရပ်ပြီး လက်ခုပ်တီး၊ သြဘာပေးသည်။ ဘုရင်ခံချုပ်က စတင်၍ လက်ခုပ်တီးတော့မှ ကြွရောက်လာသော ပရိသတ်ကြီးလည်း၊ လက်ခုပ်သံ တဖြောင်းဖြောင်းနှင့် ကောင်းကောင်းကြီး သြဘာပေးကြတော့သည်။ ထို့နောက် ဘုရင်ခံချုပ်က...
" ဒီနေ့ည စကားပြောကြတဲ့အထဲမှာ အစီအစဉ်ထဲမပါဘဲ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့မိန့်ခွန်းဟာ အဖိုးတန်ဆုံးပါဘဲ၊ ကျွန်တော် ပြောချင်တာကတော့ ခပ်ပေါ့ပေါ့နိုင်ငံရေးလောကကို ပြက်ရယ်ပြုတဲ့စကားပြောမိပါတယ်။ အလွန်ဝမ်းနည်းပါတယ်။ ကျွန်တော်ပြောမိတဲ့ အချက်အလက်တွေကို ရုတ်သိမ်းပါတယ်ခင်ဗျာ" ဟု ပြောလေသည်။
ဒီအကြောင်းလေးကို ကျွန်တော် တွေးမိစဉ်းစားမိတာလေးကတော့ လူတွေဟာ နိုင်ငံရေးဆိုတာနဲ့ ယုတ်မာသောအလုပ်၊ မကောင်းသောလုပ်ဟု ထင်မြင်ယူဆ နေကြဖြင်းဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကျွန်တော် အမြဲမှတ်မိနေသော စာကိုးလေး နှစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့…
ဂရိပညာရှင်ကြီး ပလေတို (Plato) ပြောဖူးတဲ့
" If good men are not willing to join politics, then they should be willing to be governed by scoundrel."
လူတော်လူကောင်းတွေ နိုင်ငံရေးမှာ မပါချင်ဘူးဆိုရင်၊ သူတို့ဟာ လူပေလူတေတွေရဲ့ အုပ်ချုပ်မှုကို ခံချင်လို့ဘဲဖြစ်ရမယ်။
မာတင်လူသာကင်း (Martin Luther King Jr) ပြောခဲ့ဖူးတဲ့…
ဝမ်းနည်းကြေကွဲစရာအကောင်းဆုံးက လူဆိုးလူသွမ်းတွေရဲ့ ရက်စက်ယုတ်မာမှု မဟုတ်ဘဲ လူကောင်းတွေရဲ့ ငြိမ်ခံနေခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုတာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ နိုင်ငံရေး ဆိုတာတွေ၊ နိုင်ငံရေး သဘောတရား သီအိုရီတွေ၊ နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်း ဆိုတာတွေ၊ ဗျုဟာတွေ စတာတွေကို နားလည်လို့ဖြစ်စေ၊ မတရားဖိနှိပ်မှုတွေကို မခံနိုင်လို့ဘဲဖြစ်စေ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကို အသက်၊ သွေး၊ ချွေး၊ စည်းစိမ်၊ ရာထူး စတာတွေကို စတေးပြီး အမှန်တရားအတွက် လုပ်ခဲ့ကြသော၊ လုပ်နေကြသော အာဇာနည် အပေါင်းကိုလေးစားပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မှန်ကန် ခိုင်မာသော ယုံကြည်ချက်တွေဖြင့် အကျဉ်းထောင်တွေ၊ တောထဲတောင်ထဲတွင် ဘဝတွေ၊ စိတ်ကူးအိမ်မက်တွေကို စွန့်လွှတ် အနစ်နာခံ တိုက်ပွဲဝင် ရင်ဆိုင်ရဲသော လူသိနည်းသော သူရဲကောင်းအပေါင်းတို့ကိုလည်း လေးစားဦးညွှတ်လိုက်ရပါတယ်။
သခင်အောင်ဆန်း က "လူညံ့စိတ်ဖျောက်ပြီး၊ နိုင်ငံရေးကို လိုက်စားလိုက်စမ်းပါ" ဆောင်းပါးကို ပြန်ဖတ်လိုသော်….
၂၅. အောက်တိုဘာလ. ၂၀၁၀
Posted by အလင်းဆက် at 4:24 AM 1 comments